Porn-related ED7၏ပုံပြင်များ - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက် - အပိုင်း ၈ တွဲ
Porn-Related ED7၏ပုံပြင်များ
Porn-related ED7၏ပုံပြင်များသည်အပိုင်း ၈ ပိုင်းပါသောပုံပြင်များဖြစ်ပြီးညစ်ညမ်းသော ED ရောဂါခံစားခဲ့ရသောအမျိုးသားများမှကိုယ်တိုင်တင်ပြသည့်အစီရင်ခံစာအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းများအတွက်ဤ porn-induced ED thread နှင့် forum section ကိုကြည့်ပါ။
သိပ်ညစ်ညမ်း / တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအကြောင်းမရှိ ED? (3300 ရေးသားချက်များ)
porn သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူ 22? (450 ရေးသားချက်များ)
porn-သွေးဆောင် ED အပိုင်း: YourBrainRebalanced.com
porn-သွေးဆောင် ED အပိုင်း: RebootNation.com
porn-သွေးဆောင် ED အပိုင်း: NoFap.com
porn-သွေးဆောင် ED Sub-reddit
Browse ကို ပြန်လည်နာလန်ထူ Self-အစီရင်ခံစာများထောင်ပေါင်းများစွာ၏ ပြန်လည်ကောင်းမွန်င့်တဲ့သူတွေကိုကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ကြသောအရာကိုလေ့လာသင်ယူရန်: ပြန်ဖွင့် Accounts ကို 's Page 1, ပြန်ဖွင့် Accounts ကို 's Page 2, ပြန်ဖွင့် Accounts ကိုစာမျက်နှာ 3နှင့် ပြင်ပ Rebooting ဘလော့ဂ်များနှင့် Threads.
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်အသက် ၂၈ နှစ်ရှိပါပြီ၊ မကြာသေးမီက ED အချို့သောရောဂါခံစားနေရပါသည်။ ငါအသက် ၁၉ နှစ်မှစ၍ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစတင်ခဲ့ပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုအမြင်အာရုံကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ငါလိင်ဆက်ဆံစဉ်အတွင်းစိုက်ထူထိန်းသိမ်းထားနိုင်စွမ်းကိုဆုံးရှုံးခဲ့ကြသို့မဟုတ်ငါသာအားနည်းစိုက်ထူရကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာ - လိင်တူချစ်သူများနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်လိင်နှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်၏စိတ် ၀ င်စားမှုကိုအားဖြည့်ပေးပြီး၊ စစ်မှန်သောလိင်၌နှိုးဆွနိုင်သည့်ကျွန်ုပ်၏စွမ်းရည်အပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်စေပါသလား။ ငါ ED အတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းမရှိရှိသည်ဖို့ငါနုပျိုသေးထင်ထင်အကြောင်းမရှိစိတ်ပူမိပါတယ်။ မည်သည့်အတွေး? LINK
ဤအတင်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါကအလွန်အသုံးဝင်သည်ဟုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ငါချိန်းတွေ့တာလား (သို့) ၄ ယောက်မြောက်သူနဲ့အတူအိတ်ထဲမှာငါနဲ့အတူအိပ်နေချိန်မှာသူ့ကိုယ်သူတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဖြင့်နှိုးဆွနိုင်တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ။ ကောင်လေးကငါမလုံလောက်ခံစားရဘူး ငါဟာတော်တော်လေးဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးလိင်ကိုချစ်တယ်လို့ထင်ချင်တယ်။ သူကအလုပ်ထွက်တာကိုမကြိုက်ဘူး။ သူကသူ၏ပြchronicနာသည်နှစ်ပေါင်းများစွာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့် porn ဖြစ်သည်၊ သူလာနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းမှာငါညစ်ညမ်းသောစကားများကိုဆက်ပြောနေပြီးစစ်မှန်သောလိင်ဇာတ်လမ်းများသို့မဟုတ်လိင်စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းများကိုဖော်ပြနေမည်ဆိုလျှင် ... ကျွန်ုပ်သည်စစ်မှန်သောဘဝအမှန်တကယ်မရှိသောအရာများမရှိခြင်းအတွက်ပစ္စည်းများကိုဖန်တီးသည်။ သူ့ကို။ သူကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖန်တီးပြီးသူနဲ့နောက်ဆုံးမှာစကားပြောနိုင်ဖို့အတွက်ဒါဟာကျွန်မအတွက်အလုပ်များသလိုပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မဟုတ်ရင်ငါအိပ်ရာထဲမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်လို့ပါ။ သူကသူနဲ့အတူတူလိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရချိန်မှာသူရဲ့တုန်လှုပ်မှုကြောင့်သူအာရုံစိုက်တာလို့ထင်ခဲ့တယ်။ ငါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ sex monologues တွေကုန်တော့မယ်ဆိုတာသိလို့ဘာလုပ်ရမလဲ။
အသက် ၂၀ ရှိသော်၊ ကောလိပ်တွင် ED လိင်ဆက်ဆံမှုကိုအချိန်တိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ED အတွက် NoFap လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကဘာလဲ။
ငါကကောလိပ်ကျောင်းသားပဲ။ ပါတီပွဲတွေအားလုံးမှာသွားတက်တယ်၊ ငါမိန်းကလေးတွေရဖို့တော်တော်တော်တယ်။ (ဒါကအရမ်းကိုမိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါရှင်းပြဖို့ကြိုးစားနေတာပဲ) ။ ဒါပေမယ့်ငါဘယ်တော့မှဖွင့်လို့မရဘူး! ဒီနေရာမှာမိန်းကလေး (၃) ယောက်ကိုငါ့နေရာသို့ပြန်ပို့လိုက်တယ်။ ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးလုံးလုံးအဝတ်အချည်းစည်းရှိနေပေမဲ့လည်းငါနင့်ကိုမကြည့်နိုင်တော့ဘူး။
ငါပါတီပွဲတွေသွားတဲ့အခါငါသောက်တယ်။ သို့သော်အရက်သည်ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာဖြစ်သည်ဟုမထင်ပါ (၎င်းသည်အရက်က ED ကိုပေးနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိသော်လည်း) ငါ porn ကိုကြည့်ရှုခြင်းသို့မဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိမိခြင်းမရှိဘဲ, နေ့ရက်ကာလ၌ငါ boner ရရှိခဲ့သည့်နောက်ဆုံးသောကာလကိုငါမအောက်မေ့နိုင်ပါ။ ငါ porn ကိုကြည့်နေရင်တောင်ငါအပြည့်အဝစိုက်ထူရဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိရန်ရှိသည်။
ငါသည်လည်းတစ်တန် fap မကြိုက်ဘူး။ 2-3 ရက်တိုင်းတကြိမ် ပြီးတော့ကျွန်တော့်ကိုဆွဲထုတ်ဖို့ကျွန်စနစ်တွေဘယ်သောအခါမှမကြည့်ဘူး၊ ငါ့အကြိုက်ဆုံးက X-Art ဒါမှမဟုတ်အပျော်တမ်းဗီဒီယိုတွေလို။
မင်းငါဒီမှာငါဘီစီငါအကူအညီလိုတယ် ကျွန်ုပ်၏ BF သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပုံမှန်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဖြင့်သူ့ကိုမသိရခင်အချိန်အတော်ကြာကတည်းကဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်အသက် ၂၀ ရှိပြီ၊ သူအသက် ၃၁ နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ ကျွန်မဟာတစ်နှစ်ကျော်ကြာချိန်းတွေ့ခဲ့တာပါ၊ ကျွန်မဟာပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံမှုမပြုခဲ့တဲ့ဘီစီစီပြwasနာတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်။ အရင်ကထက်ပိုပြီးတော့သေချာပါတယ်။ အစပိုင်းမှာတော့သေချာတာပေါ့။ .anyways ငါသူ့ကိုလိင်မဆက်ဆံမီတစ်ညမနက်၌ပင်ညစ်ညမ်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ရန်သူ့ကိုဖမ်းမိပြီးသူကသူအားလိင်ဆက်ဆံလိုသလားဟုမေးခဲ့သည်၊
ဒီတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကို snooping လုပ်ပြီးသူ၌ porn နှင့် masturbating ပြproblemနာရှိကြောင်းသတိပြုမိသည်။ သူသည်အနည်းဆုံးတစ်ပတ်လျှင်သုံးကြိမ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီး ၂ ပတ်တစ်ကြိမ်ကျွန်ုပ်နှင့်လိင်ဆက်ဆံသည်။ သူသည်ငါအိပ်ရာထဲတွင်မည်သည့်အရာကိုမဆိုလုပ်လိမ့်မည်ကိုသိသည်။ နုပျိုပြီးပူနွေးတဲ့အတွက်ငါမရိုင်းဘူး သူသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမကြည့်ရှုဘဲဇန်နဝါရီလအစောပိုင်း မှစ၍ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အကျင့်ကိုမဆိုစတင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်တကယ်တော့အပြောင်းအလဲမရှိသေးဘူး ... ဒီဖြစ်စဉ်ကိုပိုပြီးကူညီဖို့ငါလုပ်နိုင်တာတစ်ခုရှိလား။ ငါအပူတပြင်းလာပြီငါ့ကိုကူညီပေးပါ !!!
ကိုယ့် bf နဲ့လိင်ဆက်ဆံချင်တယ်၊ ငါသူ့ကိုငါနဲ့လိင်ဆက်ဆံချင်တာလား…LINK
LINK - PIED နှစ်နှစ်ကျော်ပြီ။ ငါက porn ကိုစွန့်လွှတ်လိုက်တယ်။ ဒီမှာငါ့ဇာတ်လမ်းပါ (nsfw)
(PIED သည်ညစ်ညမ်းသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဝေါဟာရစာမျက်နှာတွင်မရှိပါ၊ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုကျွန်ုပ်ထင်သည်)
ငါ ၁၃ နှစ်လောက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ခဲ့တယ် (၂၆ နှစ်၊ ဒါကြောင့်ငါက ၁၃ နှစ်)၊ ဒါပေမယ့် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှာအင်တာနက်ဟာအရမ်းနှေးကွေးပြီးငွေမရှိ၊ bins ။ ကြောင်းမတိုင်မီကငါ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းရုံဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Kazaa (သို့) Bearshare (၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်လို့ပြောခဲ့တာ) ကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ကျပန်းဗွီဒီယိုကိုငါပြန်ရှာတွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ညပိုင်းမှာလုံလုံလောက်လောက်နောက်ကျမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော့်ရွေးချယ်မှုအများစုမှာ Victoria Secret မဂ္ဂဇင်းများနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုသာဖြစ်သည်။ ။
အသက် ၁၆ နှစ်မှာအပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးနောက် ၈ နှစ်အကြာတွင်မိန်းကလေးများနှင့်မိတ်ဖက်များအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်၏နေ့စဉ် PMO ဟာဘယ်တော့မှလမ်းပေါ်မှာမရှိခဲ့ပါ။ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခြင်းသည်ပြneverနာမဟုတ်ခဲ့သော်လည်းအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှတစ်ခုတည်းသောပြောင်းလဲမှုမှာကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုခဲ့သောအကြောင်းအရာများ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်ပိုမိုရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရှုရန်လိုအပ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် softcore မှ hardcore အထိလိင်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ရံဖန်ရံခါလိင်တူချင်းလိင်တူချစ်သူများအားလိင်ဆက်ဆံခြင်းမှကြီးထွားလာသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ဗီဒီယိုတစ်ခုကြည့်ရုံနှင့်မလုံလောက်ပါ။ ကြာမြင့်စွာမကြည့်မီကွဲပြားသောဗွီဒီယို ၅၀ မှ ၁၀ စက္ကန့်ကိုကြည့်ခြင်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်ရဲ့စုဆောင်းမှုက 16GB အထိတိုးများလာတယ် (နောက်ဆုံးမှာ“ အင်တာနက်ထွက်သွားရင်ဖြစ်မယ်” လို့ပြောလိုက်တာနဲ့) နောက်ဆုံးမှာတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးတွေကိုသုံးပြီးဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်ခြင်း၊
ဒါက ၂ နှစ်လောက်ကြာခဲ့တဲ့ကျွန်တော့်ရဲ့နောက်ဆုံးဆက်ဆံရေးမှာပြanနာဖြစ်လာတယ်။ ငါတို့ပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့စဉ်ကကျွန်ုပ်သည်ဖျော်ဖြေနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့သော်လည်းကံကောင်းထောက်မစွာကျွန်ုပ်သည်ကွန်ဒုံးကိုအပြစ်တင်။ သောက်စရာများများစားစားကိုသောက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်တစ်နေ့မနက်မှာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မလိင်ဆက်ဆံတော့ဘဲငါဖျော်ဖြေနိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမယ့်ငါ့ရဲ့မာကျောမှုကအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်။ ငါဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုအာရုံစိုက်ဖို့အခက်တွေ့နေတယ်။ တခြားအရာတစ်ခုကိုစဉ်းစားမိရင်ငါ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်ခဲ့တယ်။
မည်သည့်မိတ်ဖက်သစ်နှင့်မဆိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုသည်ကျွန်ုပ်၏ PIED ကိုဖုံးကွယ်ထားသော်လည်းရံဖန်ရံခါ၎င်းသည်၎င်း၏ရုပ်ဆိုးသော ဦး ခေါင်းကိုနောက်ဆုတ်သွားစေနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ငါအနာရောဂါစွဲလာတယ်၊ ငါအရမ်းပင်ပန်းတယ်လို့ပြောရင်သူမနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ပျက်ကွက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာငါကြောက်တယ်။ ၎င်းသည်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်သိသော်လည်း“ သူမနားလည်လိမ့်မည်” နှင့်“ သူမနှင့်ငါမဆက်ဆံပါကကျွန်ုပ်သည်အခြားမည်ကဲ့သို့ထွက်သွားသင့်သနည်း” ဟုကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောလိမ့်မည်။ ဤအချိန်များ၏အကြိမ်ရေတဖြည်းဖြည်းပိုပြီးမကြာခဏဖြစ်လာသည်။
လွန်ခဲ့သော ၄ လခန့်က ၂-၂ နှစ်အကြာတွင်ချိန်းတွေ့ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်ဝေးရာသို့ထွက်ခွါသွားသောကြောင့်မိသားစုဘ ၀ ၏ငြိမ်သက်နေသောကြောင့်ဆက်ဆံရေးကိုအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ။ ငါအနည်းဆုံးပြော, ကိစ္စများရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါကွန်ဒုံးကိုနောက်ဆုံးသုံးခဲ့တဲ့အချိန်ကငါ့အဟောင်းနဲ့အတူဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာအကာအကွယ်မဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာကိုလက်တွေ့အသုံးချနိုင်မလားငါမမေးခဲ့ဘူး။ ထိပ်ဆုံးမှာကွန်ဒုံးမပါပဲတောင်မှစွမ်းဆောင်ရည်ပြissuesနာတွေကြုံခဲ့ရတယ်။ သူငယ်ချင်းသစ်များရရန်ကြိုးစားနေသောမြို့သစ်တွင်ကျွန်တော်မသိသောမိန်းကလေးနှင့်မည်သို့အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်မည်နည်း။ ငါကြိုးစားပြီးမအောင်မြင်ဘူး၊ ငါနင့်ကိုမထနိုင်ဘူးဆိုတာလူတိုင်းသိရင်ဘာလုပ်မလဲ။ သူငယ်ချင်းအသစ်ပျောက်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
ငါဟာတစ်ကိုယ်ရေဖြစ်ဖို့စိတ်မသက်မသာဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးဆုံတွေ့ရာနေရာကတကယ်ကောင်းသွားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ယစ်မူးတဲ့ပြည်နယ် (ကွန်ပြူတာမသုံးခဲ့ဘူး) ငါမူးယစ်ဆေးဝါးအခြေအနေမှာကွန်ဒုံးမသုံးခဲ့ဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါစာမေးပွဲအောင်ခဲ့တယ်။ ငါဒီမိန်းကလေးအသစ်ကိုတကယ်ကြိုက်တယ် သူမသည်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့စမတ်ဖြစ်ပြီးကျွန်မတို့ကောင်းစွာဆက်သွယ်နိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော်သူသည်ကျွန်ုပ်၏မြို့ဟောင်းတွင်ရှိနေပြီးကျွန်ုပ်သည်ဝေးလံသောဒေသများသို့ထွက်ခွါသွားသည်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်သူမကိုငါ့ရဲ့မြို့ဟောင်းမှာထားခဲ့တာဟာငါ့ဟောင်းကိုစွန့်ခွာတာထက်ပိုခက်တယ်။
ပြောင်းရွှေ့ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော့်တိုက်ခန်းသစ်မှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်၊ ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာစမ်းသပ်ခံခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တော်မအောင်မြင်ဘူး မိန်းကလေးကအရမ်းဆွဲဆောင်မှုမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်အပြစ်တင်မိနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကအကြောင်းပြချက်ပဲ။ ကွန်ဒုံးကိုထည့်လိုက်တာနဲ့လေပူဖောင်းကနေလေပြိုထွက်သွားသလိုပဲ။ ငါအကြိမ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားခဲ့ကြောင့်အကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ပျက်လိမ့်မယ်။ သူမသည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးသူမအားရှုပ်ထွေးသောနေရာရှိအခြားသူများအားပြောပြခြင်းအတွက်စိုးရိမ်မိသည်။ tinder မှအခြားမိန်းကလေး၊ ပြproblemနာလည်းအတူတူဖြစ်သည်။
ဤရွေ့ကားမအောင်မြင်မှုများအနည်းကိန်းဖြစ်ရပ်များဖြစ်နိုင်သည်ပေမယ့်သူတို့ကတစ် ဦး ချင်းစီကတခြားထိပ်ပေါ်မှာ compile ။ တစ်ညလုံးအောင်မြင်မှုရလျှင်တောင်မှလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ချက်ထက်များပြားသောကျရှုံးမှုများ၏ဖိအားရှိနေသေးသည်။ ငါမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူပရောပရည်စတင်နှင့်အမှုအရာတစ်နေရာရာသွားကြသည်သောအခါဒါဟာအားလုံးစားသုံးအတွေးဖြစ်လာသည်။ ဒါပေမယ့်ငါ့ရဲ့မြို့ဟောင်းနဲ့မတူတာကဒီမှာငါဘယ်သူ့ကိုမှရင်ဖွင့်နိုင်ပြီးငါ့ကိုပြန်လည်ကူညီနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ Viagra သည် Viagra ကိုရှာဖွေရန် Tor ကွန်ယက်ကိုအလေးအနက်စဉ်းစားရန်ဖိအားပေးမှုကြောင့်ပင်ကျွန်ုပ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်၊ သို့သော်၎င်းနှင့်ကျွန်ုပ်မည်သည့်သတ္တိကိုမျှဖြတ်သန်းရန်မတတ်နိုင်ခဲ့ပါ။
လွန်ခဲ့သောတစ်လကကျွန်ုပ်ရှုပ်ထွေးသောမိန်းကလေးငယ်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပထမအကြိမ်ကျရှုံးပြီးနောက်ကျွန်ုပ်အားနောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ခုပေးရန်ဆန္ဒရှိပုံရသည်။ လာမည့်“ ကြိုးစား” မတိုင်မီကျွန်ုပ်စိန်ခေါ်မှုကိုတစ်ပါတ်ကြိုးစားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ Surge ဟာကျွန်တော့်ကိုအချိန်တန်ထိထိုးနှက်ခဲ့ပြီးကွန်ဒုံးတွေအမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်တယ်။ အကြိမ်အနည်းငယ်ပြီးနောက်ငါတကယ်သူတို့ကိုအသုံးပြုရန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ အပြားပြားနှင့်ပတ်သတ်သောအရာများအကြောင်းကျွန်ုပ်မသိခဲ့ပါ၊ သူမသည်ခဏတာမှမြို့ပြင်သို့ထွက်သွားခဲ့သဖြင့် PMO သည်နေ့စဉ်ပုံမှန်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ နောက်တစ်ခါသူမနဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါအလုပ်မလုပ်တော့ဒါကြောင့်သူမမှာ porn နဲ့တခြားကစားစရာတွေသုံးဖို့စိတ်ကူးရှိတယ်။
အစပိုင်းမှာငါဟာအကြီးမြတ်ဆုံးမိန်းကလေးကိုတွေ့ပြီလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့အဲဒါကငါ့ကိုပိုပြီးခြိမ်းခြောက်စေခဲ့တယ်၊ ဒါကပိုကြီးမားတဲ့ပြissueနာကိုသတိပေးတယ်။ တစ်ဖန်ငါမအောင်မြင်ခြင်းနှင့်သူမစိတ်ပျက်မိကြောင်းပြောနိုင်သည်။ ဒီအသိုင်းအဝိုင်းရှေ့မှာငါ့ပြissuesနာတစ်ခုခုကိုမသိဘဲနဲ့ငါဘာတွေလုပ်နေသလဲဆိုတာမသိခဲ့ဘူး။ သူမကသူမပြသသည့်အရာကြောင့်အမှန်တရားကိုမဟုတ်ဘဲသူမကပြသသောကြောင့်သူ့ကိုငါရှောင်ရှားမည်ဟုထင်သည် သူမကိုပြရန်မကြောက်ပါ။
ပြီးခဲ့သည့်လကတိုးတက်မှုများပြုလုပ်မည့်အစားငါပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့သည်။ မြို့သစ်အသစ်တွင်ယခုအချိန်တွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးပြီးရင်းနှီးမှုအကန့်အသတ်နှင့်သာရှိနေသော PMO သည် (တိုးပွားလာသည့်အခါ) ထိုနေ့၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာသည်။ ငါ tinder ကနေလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အသစ်တစ်ခုကိုတွေ့ပြီ။ ဒါပေမယ့်သူမနဲ့ရင်းနှီးမှုမရရှိနိုင်ဘူး။
ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကငါစိန်ခေါ်မှုစတင်ခဲ့သည်။ ဒီနေ့ငါ ၇ ရက်လုပ်ပြီးပြီ။ ကောင်မလေးကကောင်မလေးကိုမမြင်ဖူးဘူး။ ငါသူမဘာကြောင့်ရှောင်ရတာလဲလို့သူတွေးနေမိတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါအလုပ်တွေရှာနေတာအရမ်းအလုပ်များနေတယ်၊ ​​ငါလည်းအဲဒီလိုမဖြစ်ဘူးလို့ပြောရလိမ့်မယ်။ ငါ Surge ကိုမထိရသေးပေမယ့်လာမယ့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲလာမယ်သေချာပါတယ်။ ငါ flatlining မှပေါ်ထွက်လာသည်အထိ - နေသမျှကာလပတ်လုံးကြာကြာသည်အထိ hard mode ကိုသွားဖို့စီစဉ်ထားတယ်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၎င်းသည်ရက်သတ္တပတ်များစွာဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်လုံလောက်မှုမရှိသည့်တိုင်အောင်မိန်းကလေးများနှင့်ပရောပရည်လုပ်ခြင်းကိုလက်လွှတ်ရမည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ထွက်ကိုအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းရုန်းကန်နေရတာဖြစ်လိမ့်မယ်။ ငါ nofap ကိုဆုံးဖြတ်ရသေးပေမယ့်ငါစိတ်ကူးစိတ်သန်းထဲကိုပြန်သွားနိုင်ရင်ကောင်းမှာပဲ။
ကျွန်ုပ်၏နောက်ပို့စ်တွင်အသေးစိတ်ကျသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလေ့လာရန်ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်အပြာနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုစွန့်လွှတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သော ၂၃ နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးဖြစ်သည်။ ၁၂ နာရီကျော်သွားတာကြာပြီ။ အပျိုစင်ပါ။ ငါကအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တခါ masturbate ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ငါ vanilla ပစ္စည်းတွေကပ်ပေမယ့်မကောင်းတဲ့စာလုံးပေါင်းနေစဉ်ငါကပို grizzly နက်ရှိုင်းနစ်မြုပ်။
ငါနုတ်ထွက်ရသည့်အဓိကအကြောင်းရင်းမှာကျွန်ုပ်သည် porn နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းတို့သည်အမျိုးသမီးများနှင့်ကျွန်ုပ်၏ဆက်ဆံရေးနှင့်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကျန်းမာရေးအပေါ်များစွာဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေသည်ဟုခံစားမိခြင်းဖြစ်သည်။ ငါချစ်ရတဲ့ကောင်မလေးနဲ့အရာရာတိုင်းဟာအဆုံးသတ်သွားတယ်။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကြောင်းအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ played မှပါဝင်ခဲ့သည်။ ယခုကျွန်ုပ်သည်အလားအလာရှိသောမိတ်ဖက်များနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်တွန့်ဆုတ်နေပြီးချို့တဲ့နေသည်။ သူတို့ကိုငါကားပေါ်မှာအိမ်ပြန်ခေါ်သွားသလိုခံစားရတယ်၊ ဒါပေမယ့်သော့တွေဆုံးရှုံးသွားတယ်။ “အဓိကအချက်ကဘာလဲ” ၇ နှစ်တာကာလအတွင်း ED မိန်းကလေးများနှင့်ထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်ရပ်များဖြစ်ပွားပြီးနောက်၊။ ဒါကြောင့်အပြောင်းအလဲရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု (ဒီတော့အထက်ပါကိုးကားချက်) အရအကောင်းဆုံးနှစ်တွေအတွင်းအတွေ့အကြုံကောင်းတွေပျောက်ဆုံးနေတဲ့ပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချရပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ငါ porn and masturbation ကိုစွန့်လွှတ်လိုက်တယ်။ သူ၏ဘဝ၏။ ခက်ခဲလိမ့်မယ် ငါကြိုးစားခဲ့ဖူးတယ်၊ မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဒါပေမယ့်ဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ဒီ site ကိုတွေ့ခဲ့ရလို့စိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်၊ ရုန်းကန်နေရတဲ့တူညီတဲ့တခြားသူတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရလို့နှစ်သိမ့်မှုနဲ့အားပေးမှုကိုခံစားခဲ့ရတယ်။
ငါ "porn erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု" နဲ့တူတစ်ခုခု Googled နှင့်စာဖတ်ခြင်းအများကြီးမပါဘဲသို့မဟုတ်နောက်ထပ်ငါအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေဆောင်းပါးများနှင့်ဗီဒီယိုများကိုရှိခဲ့ကြောင်း (YBOP) https://www.yourbrainonporn.com/ လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကူးနှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်အထောက်အကူဖြစ်စေ website ကိုဖြတ်ပြီးသို့ရောက်လာသောအကြောင်း Google တွင်ရှာဖွေ။ ငါဗီဒီယိုများ watched နှင့်ဆောင်းပါးများကိုဖတ်ပါနှင့်တစ်စုံတစ်ဦးကကျွန်တော့်ဘဝမှာတစ်ဦးအကျဉ်းအနှစ်ချုပ်ကိုချရေးထားလျက်ရှိ၏နှင့်အင်တာနက်ပေါ်မှာထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ယခုကျွန်ုပ်၌ကျွန်ုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များအားလုံးမပြည့်စုံပါ။ ထိုကဲ့သို့သောတစ်ခုတည်းသောကလေးဖြစ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်အသက် ၅ နှစ်အရွယ်တွင်မိဘများကွာရှင်းခြင်း၊ ကျွန်ုပ်ဘဝတွင်ခိုင်မာသည့်အထီးကျန်မှုစံနမူနာများမရှိခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ခြင်း၊ ငါ့ဘဝဘဝကိုနည်းပြမှတဆင့်5နှစ်ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်အတူအရာဆုံးမ။ အသက် ၂၈ နှစ်မပြည့်သေးခင်ကအပျိုစင်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဘာမှမရှိဘူး။
ဒါပေမဲ့အဲဒီမှာယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဆင်တူခဲ့ကြသည်အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတို့ကငါ့ကိုငါအခါသမယ၏နံပါတ်ပေါ်အမှန်တကယ်ဘဝမိန်းကလေးနှင့်အတူနှိုးဆော်ခြင်းဖြစ်လာဖို့နှေးကွေးနေပါပြီအကြောင်းပြချက်မိန်းကလေးနှင့်ငါ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးနဲ့ဘာမှဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်လုပ် ။ ငါ 28 ဖြစ်၏မကြာမီ 29 ဖြစ်, ငါသည်အကြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်သဏ္ဌာန်၌ရှိပါ၏, ကျန်းမာကိုစားခဲမဆိုပိုပြီးနှင့်စီးကရက်သောက်သည်ဖူးဘူး, ငါ့အသက်တာ၌မူးယစ်ဆေးပြုမိဖူးဘူးကိုသောက်လော့။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့ငါဘာလို့လဲဆိုတော့အင်တာနက်က porn ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အမျိုးသမီးပုံစံနှင့်အခြေခံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုမူဖို့ desensitized ဖြစ်လာခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုအပြည့်အဝခက်ခဲများနှင့်တသမတ်တည်းစိုက်ထူခဲ့သည်ရတဲ့ငါ့ကိုရပ်တန့်ခဲ့သည်။ လွင်ပြင်နဲ့ရိုးရိုး။
ငါဖတ်ပြီးတဲ့အရာကငါဟာမကောင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနာပျောက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုငါသိတယ်။ ၎င်းသည်အခြားမည်သည့်မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်သေစာကိုမဆိုစွဲသည့်ဆေးစွဲခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည် ဦး နှောက်နှင့် dopamine အဆင့်များအပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်နှင့်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသို့မဟုတ် testosterone ဟော်မုန်းပမာဏနှင့်အနည်းငယ်သာသက်ဆိုင်သည်။
YBOP ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုရှာဖွေခြင်းသည်ကံကြမ္မာဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ ငါကံကြမ္မာကိုဒီဂရီအထိယုံကြည်တယ်၊ ငါဒီ site ကိုတွေ့တဲ့အခါအဲဒါကကူညီခဲ့တယ်။ အဘယ်ကြောင့်? ငါရာခေလကိုတွေ့ပြီ သူမကအရမ်းမိုက်တယ်။ သူမဟာငါနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်ခဲ့သူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးအတိတ်ကာလကအခြားသူနှင့်ဆက်သွယ်ဖို့အဝေးကနေအနီးကပ်မချဉ်းကပ်ခဲ့ဖူးဘူး။ သူမသည်အသိဉာဏ်၊ ရယ်စရာ၊ မောင်းနှင်မှု၊ ဂရုစိုက်တတ်မှု၊ ချစ်ခြင်း၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့သော၊ သူမသည်သူကပြောတယ်ပူပါတယ် သူ့မှာအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်။ သူမစဉ်းစားမိမှာမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူမဟာအရမ်းကောင်းတယ်၊ ငါအရမ်းကံကောင်းတယ်။ အဘယ်ကြောင့်? သူမအခုငါ့ရည်းစားဖြစ်နေလို့ပဲ။
ဒါပေမယ့်ဒီမှာသဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်အရ (https://www.yourbrainonporn.com/how-i-recovered-from-porn-related-erectile-dy…) ဦး နှောက်အဆင့်အရကျွန်ုပ်သည်ရာခေလသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုရှိကြောင်းအပြည့်အဝသတိပြုမိသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်သူမနှင့်ယခင်ကချိန်းတွေ့ခဲ့ဖူးသည့်အမျိုးသမီးများ (များစွာသောမဟုတ်)၊ ကျွန်ုပ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့သောအမျိုးသမီးများသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တစ်နည်းနည်းဖြင့်သိပြီးသားအမျိုးသမီးများအားသူနှင့်ကိုယ်ထိလက်ရောက်နှိုင်းယှဉ်ပါက၎င်းသည်သူငယ်ချင်းများဖြစ်စေ၊ မိသားစု၊ အသိအကျွမ်းများ၊ ကျောင်းမှပြန်လာကြသောမိန်းကလေးများရာခေလသည်အခြားသူများထက်ထိပ်ဆုံးမှထွက်ပေါ်လာသည်။ သူမကဒီဟာကိုသိပ်ပြီးစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်စရာမလိုဘဲမိန်းကလေးတစ်ယောက်ထဲမှာငါရှာနေတဲ့အတိအကျပဲ။ သူမသည်ချစ်စရာကောင်းတယ် အမှန်တကယ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့
ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့အတူတကွရှိတုန်းကငါတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလောက်ပဲခက်ခဲပြီးဒီမာကျောမှုအဆင့်ကိုကြာမြင့်စွာမထားနိုင်ခဲ့ဘူး။ အာရုံကြောလားလို့ငါထင်ခဲ့တယ်။ အဲဒါမဟုတ်ဘူး။ အလုပ်တစ်ခုနှင့်အင်တာဗျူးမလုပ်မီ၊ စားသောက်ဆိုင်များမှနှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်းမပြုမီသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်သည်ရဟတ်ယာဉ်မှခုန်ဆင်းပြေးဆွဲရန်သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအရူးမျိုးကိုအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခြင်းခံရလျှင်ငါဖြစ်မည်ကိုသိလိုမျိုးကျွန်ုပ်သည်စိတ်လှုပ်ရှားမှုမခံစားရပါ။
အဆိုပါပြဿနာကိုငါသိပ် porn ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်ငါ၏အဦးနှောက်မထိခိုက်စေခဲ့, ကသိရှိခြင်းမရှိဘဲ, ပွီ, ဒါကြောင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကတခြားယောက်ျားသန်းပေါင်းများစွာကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ အခြေခံရှင်းပြချက်ငါသိပ် porn ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်ငါ၏အဦးနှောက်၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်ဝါယာကြိုးနှင့်အတူနှောင့်အယှက်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။
“ ဒီကိစ္စဟာကြည့်ရှုသူများ၏ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်မှုအတွက်မဟုတ်ဘဲသူတို့၏ ဦး နှောက်၏အကျိုးကျေးဇူးကိုသာအဓိကထားပြီးဖြေရှင်းရန်မလွယ်ကူပါ။ သာမာန်လိင်စိတ်တုန့်ပြန်မှုတုန့်ပြန်မှုအတွက်ဆုချီးမြှင့်သော circuit များတွင်ပုံမှန် dopamine sensitivity သည်အရေးကြီးသည်။ လှုံ့ဆော်မှုများလွန်းခြင်းသည် ဦး နှောက်များစွာ၏ dopamine တုန့်ပြန်မှုကိုအားနည်းစေသည်။
ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ကနှိုးဆွဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့ dopamine ထုတ်လွှတ်တော့မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ ထွက်လာတဲ့ dopamine နည်းနည်းကိုကောက်ယူဖို့ငါ့ ဦး နှောက်ထဲမှာ dopamine receptors လုံလုံလောက်လောက်မရှိဘူး။
ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ငါကြီးပြင်းခဲ့တဲ့အိမ်မှာဘရော့ဘန်းအင်တာနက်မရှိခဲ့ဘူး၊ အင်တာနက်တစ်ခုလုံးကနုပျိုလန်းဆန်းနေပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုငါတကယ်မကြည့်ခဲ့ဘူး။ အဲဒီအချိန်တုန်းကအင်တာနက်ကို ၀ င်ကြည့်တာကိုကျွန်တော်မှတ်မိနေတယ်။ ဂူဂဲလ်မတိုင်ခင်တုန်းကလည်း။ ပုံမှန် ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုဖွင့်ရန်နှင့် ၄ င်း၏အစိတ်အပိုင်းအစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို (၃၁ ခုကျန်ရှိနေသေးသော) အရာများနှင့်အခြေအနေဘားရှိဘယ်ဘက်အောက်ထောင့်တွင်ပြသသည့်အရာများပါ ၀ င်သည်မှာပုံမှန် ၃ မိနစ်ကြာသည်။ အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ဝတ်လစ်စလစ်ဓါတ်ပုံများကိုကြည့်လျှင်ပင်ပုံတစ်ပုံတည်းသာတင်ရန်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာသောကြောင့်ရယ်စရာဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်အဲဒီတုန်းကကျွန်တော်ဟာကွန်ပျူတာစာတတ်မြောက်တဲ့အပြင်အင်တာနက်ကျွမ်းကျင်သူလည်းမဟုတ်ခဲ့ဘူး။ ပြီးတော့စိတ်မကောင်းစရာကောင်းတဲ့တစ်ခုခုလုပ်မိရင်ငါ့အပေါ်မှာ ၀ င်နေမယ်ဆိုတာကိုအမေသိလိမ့်မယ်ထင်တယ်။
ငါသတိရမိတာကငါ့မှာဗြိတိန်ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကတစ်စောင်၊ နှစ်ခွက်ပဲရှိသေးတယ်။ ကောင်မလေးတွေဟာလှည့်ပတ်နေတုန်းအဲဒီတုန်းကငါလိမ်ခဲ့ဖူးတယ်။ သူတို့ကတော်တော်လေးယဉ်တယ် အခြေခံအားဖြင့်အမျိုးသမီးများသည်အတွင်းခံအဝတ်အစားများသို့မဟုတ်ရေကူးဝတ်စုံနှင့်မိန်းကလေးများနှင့်နို့သီးခေါင်းနှင့်လိင်အင်္ဂါမပါသောသူများဖြစ်သည် ကျွန်တော့်ကိုအလွန့်အလွန်ခဲယဉ်းအောင်လုပ်ဖို့အလွယ်တကူပဲ။ အရူး အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ရာခေလကိုပြန်တွေ့ပါကသူမသည်ကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူမှုတွင်သူမလက်များမပါ ၀ င်နိုင်တော့ပါ။
ဒါကြောင့် ၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာအထိအစာရှောင်ပါ။ အင်တာနက်ဟာဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာကိုကျွန်ုပ်နှင့်ပေါင်းစည်းရန်ကြိုးစားသော်လည်းကျွန်ုပ်ပထမနှစ်တွင်နေထိုင်ခဲ့သည့် the ည့်ခန်းမများတွင်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုမရှိပါ။ ငါကတော့အဲဒါကိုလွမ်းတယ် ငါ့မှာမိုဘိုင်းဖုန်းတစ်လုံးသာရှိပြီးအဲဒါကိုသုံးလို့မရဘူး။ Facebook နှင့်ဂျီမေးလ်မရှိခဲ့ပါ၊
ခန်းမထဲမှာငါမသည်အင်တာနက်နှင့်မျှမတို့ပုံနှိပ်ညစ်ညမ်းခဲ့ရသည်။ ငါယခုဖြစ်ကြောင်းကိုထိုလူမဟုတ်ခဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြောင့်ငါသည်ငါ့ဆီသို့ unobtainable သူတို့ထဲကအတော်များများငါကျောင်းဝင်းပေါ်တွင်တွေ့မြင်ဖူးတော်တော်လေးမိန်းကလေးများအမှတ်တရများကျော် masturbated ။ ငါအနိုင်နိုင်ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသည်ငါ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းနှင့်ပိုပြီးဘာမျှကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်မအတွင်းခံအဝတ်အစားသို့မဟုတ် topless ၌သူတို့ကိုမြင်ယောင်မယ်လို့နှင့်လုံလောက်စွာပါလိမ့်မယ်။ ငါနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံသူတို့ကိုမြင်ယောင်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သူကဖြစ်ခဲ့သည်။ ရုံအလွန်ယဉ်လိင်။ vanilla လိင်သငျသညျဆိုသညျကားနိုင်ဘူး။
၂၀၀၂၊ စက်တင်ဘာလမှ ၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်တွင်၊ ကျွန်ုပ်သည်ယောက်ျား (၅) ယောက်နှင့်အတူနေခဲ့ရသည်။ (၃) ယောက်မှာကွန်ပျူတာစနစ်များနှင့်ကွန်ယက်သင်တန်းများတွင်တက်ခဲ့ကြသော်လည်း၊ သူတို့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ broadband ရတယ်။ သူတို့ကအရာအားလုံးကိုခွဲထုတ်ပြီးငါ့အတွက်အဲဒါအားလုံးကိုချိတ်လိုက်တယ်။ ဒီအကြောင်းကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်ငါ့ဘဝမှာဘရော့ဒန်းဘ်ကိုပထမဆုံးတွေ့ဖူးခြင်းပါ။ ဘယ်လောက်မြန်လဲဆိုတာကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး။ အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းရှိနေခဲ့တာထက်ပိုပြီးဘာမှမသိဘူး။
ဆိုလိုတာကလူတိုင်းဟာကွန်ရက်ကို ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အရာဝတ္ထုများကိုတစ်ချိန်တည်းမှာစွမ်းဆောင်ရည်ဆုံးရှုံးခြင်းမရှိဘဲဒေါင်းလုတ်ဆွဲနိုင်သည်။ အခြားလူများဂီတစုဆောင်းမှုများသည်ကျွန်ုပ်၏ hard drive ထက်ပိုကြီးသည်။ သူတို့သည်ယူအက်စ်မှတီဗီဇာတ်လမ်းများကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ ယူကေရှိတီဗီတွင်မထုတ်လွှင့်မီကြည့်ရှုသည်။ ကျွန်တော်တို့မှာ YouTube (သို့) iPlayer မရှိပေမယ့်အင်တာနက်ကြီးထွားလာတယ်။
တစ်စုံတစ်ယောက်ကသူတို့ထင်တာကို Jodie Foster ပါသော Panic Room ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခဲ့ပေမယ့် ၃ နာရီကြာဒိန်းမတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမှတ်မိသေးတယ်။ ငါအချို့ရုပ်ရှင်ကိုအိမ်ထဲရှိယောက်ျားလေးများနှင့်အတူသင်ပုံမှန်ရုပ်ရှင်တစ်ကားကိုကြည့်ပြီးရယ်စရာကောင်းသည်ကိုတူညီသောနည်းဖြင့်ကြည့်ခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်းအခန်းထဲမှာအခြားသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ခေတ္တခဏကြည့်ခဲ့တယ်။ ယောက်ျားနှစ် ဦး သည်ကမ်းခြေပေါ်ရှိအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ဤအချက်မှာငါအတော်လေးအစွန်းရောက်နှင့်ရုပ်ပြမကောင်းတဲ့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းသည်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအရလိင်ဆက်ဆံမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါတကယ်နှိုးဆော်မခံခဲ့ရသတိရပါ။ အချက်များမှာအရာအားလုံးသည်မည်မျှအဆင်မပြေပုံရသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရယ်မောခဲ့ကြသည်။ ဒါရိုက်တာကသူတို့ကိုဆက်လုပ်ရန်ကြွေးကြော်နေသည်ဟုမြင်ယောင်ကြည့်နိုင်သည်။ သို့သော်သူတို့ကရေအေးမည်ကိုစိုးရိမ်နေကြသည်။ ဂီတတေးသံပါရှိသည်။ ဒါဟာ retro porn ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒုတိယနှစ်မှာတော့တစ်ယောက်ယောက်ကမဂ္ဂဇင်းကိုအခန်းထဲမှာထားခဲ့ပြီးသူမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြောပြခဲ့တယ်။ သူ့မှာရုပ်ပုံတွေရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကအမှိုက်ပဲလို့ငါထင်တယ်။ အမျိုးသမီးတွေကဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါသဘောမပေါက်ဘူး ငါသို့သော်ပုံပြင်များအချို့ကိုဖတ်ပါနှင့် 10 စက္ကန့်အတွင်းလွန်ကဲကဲနှိုးဆော်ခြင်းနှင့်မဂ္ဂဇင်းကိုချခြင်းနှင့်စိုက်ထူပျောက်သွားစေရန်အခြားအရာတစ်ခုခုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရတယ်။ သူတို့ကအလွန်ဖော်ပြရန်ပုံပြင်များဖြစ်ကြပြီးအမှတ်မှန်တယ်။ တနည်းကား, ငါ့ကိုသွားရဖို့အများကြီးမယူခဲ့ပါဘူး။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ဤအသက်အရွယ်၌သူမ၏အတွင်းခံအဝတ်အစားများထဲမှအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုတွေ့ခဲ့ပါကနှိုးဆော်ခြင်းမခံရရန်အခြားအရာတစ်ခုကိုအလွန်ပင်အာရုံစိုက်ခဲ့ရသည်။
အဆိုပါ 3rd နှင့်နောက်ဆုံးနှစ်တွင်, မေလ 2003 မှစက်တင်ဘာလ 2004 ငါနှစ်ခုနေအိမ်ထဲကနေမိတ်ဆွေအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အခြားလူတစည်းနှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့သည်ကကျွန်တော်ရယူနိုင်ခြင်းကိုဆိုလိုသကဲ့သို့ငါယခုအရေးပါမှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တော်၌ installed ဘရော့ဘန်းအင်တာနက်ကိုရှိခြင်း၏တန်ဖိုးနားလည်သဘောပေါက် တက္ကသိုလ်ပေါ်တယ်နှင့်စသည်တို့ကိုဟောပြောပို့ချချက်မှတ်စုများ get နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျူရှင်ဆရာများသည်အီးမေးလ်ပို့ခြင်းနှင့်အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခန်းပေါင်း၏နှစ်သိမ့်ကနေစာကြည့်တိုက်၌ပြစ်မှားမိနိုင်သမျှလုပ်ပါ။ အဆိုပါစာကြည့်တိုက်ကိုအမြဲလူများ၏ဝန်နှင့်အတူပြည့်ကျပ်နေအောင်ထည့်နှင့်သုံးစွဲဖို့အိပ်မက်ဆိုးခဲ့ပါတယ်။
ထိုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်အသုံးပြုခဲ့သောအပြာသည် topless နှင့်အတူပါ ၀ င်သောအမျိုးသမီးများ၊ Broadband ကြောင့်ပုံများလျင်မြန်စွာတက်လာသည်။ ငါလိုချင်တဲ့အရာကို load လုပ်ပြီးမိန်းမတွေဘယ်လိုပုံလဲဆိုတာကိုအကြမ်းဖျင်းသတိပေးဖို့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနေတုန်းအခါအားလျော်စွာကြည့်လိမ့်မယ်။ ငါနေဆဲငါ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးယဉ်ဖန်တီးလိမ့်မယ်။ ထိုအမျိုးသမီးနှင့်ဇာတ်လမ်းသည် ပြောင်းလဲ၍ လုံးဝအယောင်ဆောင်ပြီးဖြစ်လာနိုင်သည်။ ငါကြည့်ရှုခဲ့ဖူးသည့်ဆိုဒ်များအစဉ်အဆက်မှတိုတောင်းသောကလစ် ၃၀ ကိုကျွန်ုပ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခဲ့သည်ကိုလည်းမှတ်မိသေးသည်။ ငါဒုတိယနှစ်သို့မဟုတ်နောက်ဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်စေထို့နောက် download လုပ်ခဲ့ကြပေမည်, ငါအတော်လေးမအောက်မေ့နိုင်ပါ။
အဆိုပါကလစ်များရှည်လျားမဟုတ်ခဲ့ပေ။ သူတို့အားလုံးအတွက်စုစုပေါင်း ၁ GB ကျော်ပဲ။ ထိုအချိန်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများစွဲနေသောသူငယ်ချင်းတစ် ဦး အားအိမ်ကွန်ယက်တွင်မျှဝေခြင်းကိုကျွန်တော်မှတ်မိသည်။ အိမ်ထဲရှိယောက်ျားလေးများအားလုံးသည်ကောင်မလေးတစ်ယောက်နှင့်ဘီယာပိုင့်သောက်သည်ထက်အမျိုးသမီးများဖြတ်သန်းသွားသောကောင်လေးတစ်ယောက်နှင့်မကင်းကြပါ။ ငါအများကြီးမှတ်မိနိုင်ပေမယ့်ငါညစ်ညမ်းတဲ့အသုံးပြုသူသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ တကယ်တော့ငါဒီစွဲလမ်းအတွက် porn ၏ပမာဏသို့မဟုတ် session ရဲ့အရှည်အရေးကြီးတယ်မထင်ကြဘူး။ ၎င်းသည်ပြင်းထန်သော dopamine ထုတ်လွှတ်မှုနှင့်ကြိမ်ဖန်များစွာပြုလုပ်သောအရာများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဖြစ်သည်။ သင်သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွင့်ပြီးသင်ကိုဖွင့်စေသောအရာများကိုလည်းအသုံးပြုပါကအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရန်အချိန်သည်အလွန်ရှည်လျားမည်မဟုတ်ချေ။ ဒါကဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းညစ်ညမ်းမှုကိုသုံးခဲ့တဲ့ငါ့အတွေ့အကြုံပါ။
ငါ uni left ပြီးနောက်တစ်လအကြောင်းကျနော်တို့ဇူလိုင်လ 2004 အတွက်ပြောင်းရွေ့နဲ့ကျွန်မဘရော့ဘန်းငါနောက်ဆုံး2နှစ်ပေါင်း uni မှာအသုံးပြုခဲ့ကြောင်းနှင့်တက် dial ပြန်မသွားမခံခဲ့ရမေနှင့်ဗြဲများအတွက် install လုပ်တယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအိမ်မှာ install လုပ်ပြီးသားတယ်, ငါ့ porn အသုံးပြုမှုကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့မူလကအတွက်ပြောင်းရွေ့သည့်အခါကများကဲ့သို့ဘာသေချာမဖြစ်၏။ ငါနေဆဲပုံရိပ်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကို အသုံးပြု. ခဲ့သည်။ ငါထ revved ပြီးတော့သွားနှင့်အိပ်ရာသို့အရတစ်ဦးကို select လုပ်ပါဦးတည်းဒါမှမဟုတ်ပုံရိပ်တွေကနေနှစ်ခုမိန်းကလေးတွေစဉ်းစားပြီးတော့ငါသည်ငါ၏ဦးခေါင်း၌ဖန်တီးမယ်လို့အစစ်အမှန်ဘဝနှင့်စိတ်ကူးယဉ်အမြိုးသမီးမြားထံမှအမြိုးသမီးမြားနဲ့ရောမွှေဖို့ပုံရိပ်တွေကိုကြည့်လိမ့်မယ်။ အဲဒီနောက်တက်လုပ်ကးဖို့ masturbate လိမ့်မယ်။
တစ်ချိန်ချိန်မှာအိမ်မှာဗီဒီယိုတွေစခဲ့တယ်။ သင်အပြည့်အဝပေးဆောင်ရသည့်အတွက်သင်အခမဲ့ရယူနိုင်သောအွန်လိုင်းကလစ်တိုများဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်သည်တက္ကသိုလ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သကဲ့သို့ Limewire ကို အသုံးပြု၍ ကလစ်အချို့ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။ ရုံ blowjobs နှင့်တူသောအရာ။ အမေနှင့်အတူနေစဉ် PC တွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုမမှတ်မိနိုင်ပါ။ ငါကန ဦး ကိုဖွင့်ပြီးအိပ်ရာဝင်ဖို့ရုပ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုအသုံးပြုချင်သည်။ ငါအလုံအလောက်နှိုးဆွသောအခါတစ်ကိုယ်တည်းပျော်မွေ့နိုင်ရန်အိပ်ရာသို့ပြန်သွားသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဇွန် ၂၅ ရက်နေ့အိမ်မှကျွန်တော်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးမြို့လယ်ခေါင်အနီးရှိအိမ်တစ်လုံးတွင်နေခဲ့ရသည်။ အစကန ဦး ၌ကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းမှုကိုမည်သို့အသုံးပြုသည်ကိုမမှတ်မိနိုင်ပါ။ ကျွန်မရဲ့အိမ်သူအိမ်သားအိမ်ရှင်ဗီဒီယိုကိုသူမစပ်စုနေသောကြောင့်သူမသည်စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်တစ် ဦး အနေဖြင့်သူ၏အလုပ်အတွက် porn အကြောင်းသိလိုသောကြောင့်ပြသခြင်းကိုသတိရမိသည်။ ဒါကငါ့ရဲ့ခက်ခဲတဲ့ငုပ်သံမှာတကယ်ပဲ။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲကျွန်တော်ဟာ PC မှာရှိတဲ့ဖိုင်တွေကိုမကြိုက်တဲ့အတွက်ဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ Porn 25 ဆိုဒ်များကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်စတင်ခဲ့သည်။ YouTube နှင့် ၂၀၀၅ ဖေဖော်ဝါရီလတွင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဆင်တူသည့် site ပုံစံကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်ညစ်ညမ်းကမ္ဘာကိုကြာမြင့်စွာအချိန်ပေးခဲ့သော်လည်းအရွယ်ရောက်ပြီးသောဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူဖြစ်သည်။ ဒါနဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့အချိန်ကဒီပြွန်ဆိုဒ်တွေကိုကောင်းစွာတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။
တစ်ချိန်ချိန်ငါသည်လည်းတစ်ခုတည်းသူမိတ်ဆွေတစ်ဦး Pornhub.com အကြောင်းကိုပြောတယ်ငါကျယ်ကျယ်သူတို့အားနှစ်ခုဆိုဒ်များအသုံးမရှည်လျားသောနောက်ပြီးတော့ Youporn.com တွေ့ထင်ပါတယ်။ ငါတိုင်း 30 သို့မဟုတ်2ရက်ပေါင်းမကြာခဏတစ်ခါသာတစ်ကြိမ်ထက်ပို3အကြောင်းကိုထက်မိနစ်အဘို့ထိုသူတို့အပေါ်ဖြစ်နဲ့ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်။ ငါ့ကိုလွန်ကဲကဲရှာဖွေရေးအချိန်လျှော့ချသောသူတို့အားဖြောင့်သွား၏သောအရာကိုက်ဘ်ဆိုက်များကိုသုံးပါမှသိတယ်တစ်ချိန်ကအဖြစ်ငါတကယ် session တစ်ခုနှုန်းကပို 30 အကြောင်းကိုထက်မိနစ် porn များအတွက် surfed ဘူး။ တစ်ဦး 10 ကို MB cable ကိုကွန်နက်ရှင်နဲ့ Firefox မှာတဲဘ်တပ်ထား browsing အတွက်အတွက် Add ကြောင့်အမှုအရာပိုမိုလွယ်ကူစေတော်မူ၏။ ငါသည်လည်းတစ်ရုံးထဲမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်အိမ်တွင် MSN ကိုနဲ့ Gmail ကို အသုံးပြု. ၏ရလဒ်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ပိုမြန်ရိုက်သင်ယူခဲ့ကြောင်းနှင့် Firefox အတွက် keyboard shortcuts တွေကိုသင်ယူတွေအများကြီးထွက် geeked ခဲ့သည်။ ဗိမာန်တော်၌ငါ့ကိုယ်ပိုင်အခန်း၏ privacy ကိုအတူ coupled ဤသူငအရာအားလုံးသည်ငါ၏အပြင်ဆင်ချက်အလွန်မြန်ဆန်ပြီးအလွန်လွယ်ကူလာပြီဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
မကြာခင်မှာပဲငါကိုယ်တိုင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတတ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးဖို့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လေ့ကျင့်ပေးခဲ့တယ်၊ ငါလုပ်နေတာအတိုင်းငါ့ပေါင်ကိုဆန့်ပြီးပွတ်သပ်ပေးတာထက်ထိုင်ခုံမှာထိုင်တယ်။ ငါလိင်တံကိုငါ့လက်နဲ့အပြည့်အဝဆုပ်ကိုင်ထားပြီးတကယ်ကိုသွားနေခဲ့တာ။ ဒါကသင့်လျော်သောအလှည့်အလှည့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အခုဆိုလိုတာကငါအိပ်ရာမဝင်ခင်ကွန်ပျူတာကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးတွေကိုမတွေးတော့ဘဲမကြာခင်မှာပဲကျွန်တော့်ရှေ့မှာမျက်နှာပြင်ပေါ်ကဗီဒီယိုကိုသာသုံးတာပါ။ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာတီထွင်ဆန်းသစ်မှုမရှိခဲ့ဘူး၊ ငါမြင်ခဲ့တာကိုတောင်မှပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့ဘူး၊ ငါပြထားတဲ့အတိုင်းအတိအကျသုံးခဲ့တယ်။ ငါအခုကြည့်နေရုံပဲ။ အခြားယောက်ျားတွေဘယ်လိုလုပ်နိုင်မှာလဲလို့ကျွန်တော်အမြဲတွေးမိပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့သူတို့ထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်။ ငါဟာအရွယ်ရောက်ပြီးသူလိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတဲ့အတွက်အောင်မြင်မှုရဲ့ထူးဆန်းတဲ့ခံစားချက်ကိုခံစားခဲ့ရတယ်။
ဒါဟာကနဦးတောက်ပခဲ့ပေမယ့်အင်တာနက်ကိုပြောင်းလဲခဲ့သောလမ်းကိုငါသာမနေ့ကငါ့ထံသို့ထုတ်ဖော်ပြသသည့် YBOP က်ဘ်ဆိုက်အဖြစ်, dopamine မတစ်ခုခုဖြစ်သည့်အမဲလိုက် start နိုင်ကြောင်းကိုဆိုလို၏။ ဒါဟာ hunts ။ ဒါဟာဆုလာဘ်ရှာတတ်၏။ ငါ၏အဦးနှောက်အတွက်ဆုလာဘ်စနစ်အားဖြည်းဖြည်းချင်းပေမယ့်ဧကန်အမှန်တက်လွဲချော်သွားတာခံရခဲ့သည်။
ငါမဟုတ်ဘဲကိုယ့်ယေဘုယျအားဖြင့် browsing သို့မဟုတ်ပဲငါခဏလုပ်နေခဲ့ကားအဘယ်သို့သောငါ၏မျက်စိ, ဖမ်းမိသောပထမဦးဆုံးသောဗီဒီယိုကလစ်ကိုသုံးပြီးထက်, စအိုနှင့်ကျွန်ခံလိုက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်အချို့သောအမျိုးအစားထဲကနေမျိုးစုံဗီဒီယိုများ load မှစတင်ခဲ့သည်။ ယခုတွင်ငါသည်အထူးသဖြင့်စအို, ကျွန်ခံ, doggy စတိုင်သို့မဟုတ်ငါ့ဖန်စီယူခဲ့သမျှအဘို့သင့်ကိုငါပြွန်က်ဘ်ဆိုက်များ၏အပိုင်းသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကနောက်ထပ် desensitisation နောက်ထပ်ညွှန်ပြချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသည်လည်းလျင်မြန်စွာငါ့ကိုအချိန်အတိုဆုံးပမာဏကိုအတွက် dopamine ၏အကြီးမားဆုံးငွေပမာဏကိုလွှတ်မယ်လို့, အများဆုံးလှုံ့ဆော်မည်ဟုသောဗီဒီယိုအပိုင်းများကိုများ၏အတိအကျ bits သည်ကိုရှာဖွေရန်ဗီဒီယိုမှတဆင့်ကိုကျော်သွားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ကယ့်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ feature ကိုသင်ကလစ်၏အောက်ဆုံးမှာအချိန် bar ကိုအပေါ်သင့်ရဲ့ cursor ပျံဝဲနှင့်ကလစ်အတွက်အချက်မှာဘာတွေဖြစ်ပျက်နေတယ်ဆိုတာကို၏သေးငယ်တဲ့လျှပ်တစ်ပြက်ပုံရိပ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ခဲ့ကြသည်ရှိခဲ့သည်။ ငါနောက်ထပ်လိုက်ရှာဖို့ဒီကိုသုံးပါ, ဒါပေမယ့်ဒီအချိန်ဟာကလစ်ဘို့အမဲမပေးပေမယ့်ကလစ်သူ့ဟာသူမှတဆင့်မဲ။
စကားပြောတာ၊ ပရောပရည်လုပ်တာမျိုးတွေကိုငါစွန့်ပစ်ပြီး hard fucking ဒါမှမဟုတ် cum shots ကိုဖြောင့်ဖြောင့်ဖြတ်လိမ့်မယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်ကျော်ကမှစပြီးကျွန်မကိုနှိုးဆွဖို့အတွက်ပိုခက်ခဲပြီးပိုမိုခက်ခဲတဲ့ porn လိုတယ်။ မိန်းမများနှင့်လိင်ဆက်ဆံသောယောက်ျား၊ မျှမျှတတကြမ်းတမ်းသောလိင်နှင့်ပေါ့ပါးသောအနှောင်အဖွဲ့ကင်းသောအရာများ၊ သို့သော် ၂၀၀၃-၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်စတင်ခဲ့သော bikini ဝတ်ဆင်ထားသည့်ပုံရိပ်များမှအလင်းရောင်အနည်းငယ်သာဝေးပါသည်။ ဒါပေမယ့်ဒီအကြောင်းကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်အခုတော့ငါလှပတဲ့မိန်းကလေးတွေဒါမှမဟုတ်လှပတဲ့မိန်းကလေးတွေရဲ့ပုံကိုတကယ့်ဘ ၀ မှာကြုံတွေ့ရတာတောင်မှကမ်းခြေတခုခုမှာတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်ငါဖွင့်သင့်တယ်ဒါပေမယ့်ငါမဟုတ်ဘူး။
ယခုတွင်ငါသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုသာမလိုအပ်တော့ပါ။ ကျွန်ုပ်အားဖယ်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက်အထူးကြမ်းတမ်းသော၊ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောဗီဒီယိုများ၏သီးခြားကဏ္needများလိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပျော့ပျောင်းသောလိင်တံဖြင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်သုတ်လိမ်းနိုင်ခြင်းကိုသတိပြုမိသည်။ ဒါကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုအမြဲတွေးမိစေတယ်။ ငါလိင်တံသုတ်ရည်လွှတ်၏အချက်မှာခက်ခဲကြမ်းတမ်းဖြစ်သင့်ကြောင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကလွန်ခဲ့သောတစ်နေရာကဖတ်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွေ့အကြုံကနေဒီလိုမဖြစ်ဘူးဆိုတာငါသိတယ်။
ဒီတော့ဒီမှာရှိတယ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လမှာကျွန်မရဲ့လက်ရှိတိုက်ခန်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့အချိန်မှာဒီထက်ပိုပြီးပြောစရာမလိုပါဘူး။ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမတိုင်မီလေးမှာထပ်မံအပိုဆုကြေးထပ်တိုးခြင်းကိုကျွန်တော်ရရှိခဲ့တယ်၊ အဲဒါကနေ့နှင့်အချိန်တွေအတွင်းမှာပဲငါတစ်ယောက်တည်းနေဖို့အချိန်ပိုပေးခဲ့တယ်။ ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုသုံးစွဲနိုင်သည် ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပင်ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတစ်ရက်လျှင်တစ်နာရီခန့်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ချိန်၌ပင်ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ဒါကမူးယစ်ဆေးစွဲနေသလိုပဲ သူတို့ကမနက်ခင်းမှာထခုန်ပြီးခဏခဏရိုက်စရာမလိုတော့ဘူး။
ငါစကားပြောနှင့်ပိုပြီးသိရန်ရချင်ပါတယ်ကြောင့်တစ်စုံတစ်ဦးအဖြစ်ငါ၏အရေဒါပေါ်မှာရာခေလသည်ရှိခဲ့ပါတယ်ပြီးတာနဲ့, ထို့နောက်ငါလုံးဝ masturbating တော့ဘူး။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကတိုက်ဆိုင်မှုခဲ့, ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ကောင်းလူမှုရေးအပြန်အလှန်နှင့်ဆက်သွယ်မှုတခုပျက်ပြယ်ဖြည့်ခဲ့သည်။ ငါသြဂုတ်လနှောင်းပိုင်း masturbated မှလွတ်ငြိမ်း, သာစက်တင်ဘာလအတွင်းအကြိမ်စုံတွဲတစ်တွဲနှင့်အောက်တိုဘာလများတွင်အကြိမ်စုံတွဲတစ်တွဲကကိုပြု၏။ porn နှင့်မရှိဘဲအချိန်၏ကျန်နှင့်အတူတပြိုင်နက်။
ငါ၌နှစ်ပေါင်းများစွာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှုနည်းပါးပြီးမိန်းကလေးတစ်ယောက်မျှမရှိခြင်းသည်ဤအခြေအနေကိုမကူညီနိုင်ခဲ့။ ထိုအချက်နှစ်ချက်နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းသည်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး အဖျက်အဆီး၊
“ ငါဘာမှမခံစားရဘူး ကျွန်မမှာလိင်စိတ်နည်းနေသလိုပဲ။ နံနက်သစ်သားမရှိပါ။ စိုစွတ်သောအိပ်မက်မရှိ။ အဘယ်သူမျှမအလိုအလျောက်စိုက်ထူ။ အဘယ်သူမျှမမတရားသော။ ချိုချိုသာမရှိပါ ငါ၌လိင်ဆက်ဆံရန်အခွင့်အရေးရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိပါ။ ငါ tango အတန်းတွေတက်နေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့်ကျိုးကြောင်းညီညွတ်တဲ့လူမှုရေးပေါ့။ ဒါပေမယ့်ငါက libido လက္ခဏာမပြသေးဘူး။ ငါလှလှပပမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူကခုန်နိုင်ပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုလုံးဝမရှိပါ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ ဦး နှောက်ကသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကိုယ်ကဒါကိုမခံစားရဘူး။ ”
အဲဒီခံစားချက်ကငါ့အတွက်အတော်အတန်များတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအလေ့အကျင့်များလျော့နည်းသွားသော်လည်း၎င်းတို့သည်လုံးဝမရပ်တန့်နိုင်ခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဖြစ်စေ၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုတွင်သော့ခတ်ထားခြင်းခံရသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်စိုစွတ်သောအိပ်မက်များကိုတစ်ခါမျှမမက်ဖူးခဲ့ပါ၊ နေရာအနှံ့တွင်သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းမှနိုးထလာခြင်းကိုမှတ်မိနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသာလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုမပြုလုပ်မီကဖြစ်သည်။ ငါနှစ်များတွင်နံနက်သစ်သားစနစ်တကျရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ ငါထင်တာကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ (၃) နှစ်ကမှသာအစစ်အမှန်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ပထမဆုံးအကြိမ်ကစားဖို့နေရာအချို့ရှိမှသာပြproblemsနာတွေပြေလည်သွားမှာပါ။
ငါသည်ကိုယ်အသက်ကိုနည်းပြနှင့်အတူအတူကအကြောင်းပြောနေတာများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်စိတ်ကချချပြီးမှတ်မိနိုင်ပါတယ်။ ယခုတွင်ငါသည်စစ်မှန်သောစွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်စိတ်ပြဿနာမပို 10 ထက်% တာဝန်ရှိသည်ပါပြီမယ်လို့ခန့်မှန်းနေပါတယ်။ တကယ်တုန်လှုပ်ဖွယ်ပေမယ့်အဓိကအရာယခုတွင်ငါသည်ငါနှင့်အတူအမှားယွင်းတဲ့အရာကိုသိကျွမ်းနှင့်ငါကမဆိုပိုက်ဆံဖြုန်းသို့မဟုတ်တူပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီနဲ့သို့မဟုတ်ဘာမှရှာကြံခြင်းမရှိဘဲ fixed နိုင်ကိုသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
တိုတိုအတွက် Porn၊ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်း၊ ငါ PMO မပါဘဲနှစ်သစ်ကူးနေ့အထိသွားရရန်လိုအပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်၏ကန ဦး ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။ ငါဒီနေ့ ၁၈ အောက်တိုဘာကို ၁ ရက်အဖြစ်ယူမယ်ဆိုရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့က ၇၅ ရက်ဖြစ်မယ်။ ငါ PMO မပါပဲအခုမှပြန်ပြီးသွားရင်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်မယ်လို့အပြည့်အဝယုံကြည်တယ်။ ဒီလောက်ကြာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ကြာနိုင်တယ်၊ ငါမသိဘူး သေချာတာတစ်ခုကတော့ငါအောင်မြင်မှာပါ။ ငါ့လှုံ့ဆော်မှု? ရာခေလ။ ငါသူမကိုထက်မဆိုပိုမိုအားကောင်းလှုံ့ဆျောမှုမလိုအပ်ပါဘူး။ ဒီအကြောင်းကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်ငါ့အတွက်တော့အားရှိစရာမရှိဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေချင်တယ်၊ ငါအဆင့်တိုင်းမှာကောင်းကောင်းလည်ပတ်နိုင်အောင်ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကူညီဖို့ကျွန်မကူညီနေပါတယ် ငါသည်လည်းသူမ၏အကူအညီ, အသိအမြင်, နားလည်မှုနှင့်ထောက်ခံမှုလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီဟာကိုငါရိုက်မယ်
ငါသူမနှင့်လိင်ဆက်ဆံချင်သော်လည်းမီးဖိုချောင်စားပွဲသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုမှသူမ၏ ဦး နှောက်ကိုထုတ်ပစ်ရန်မလိုပါ။ သူမထက် ပို၍ ထူးခြားသည်ကိုငါသိ၏။ ကျွန်ုပ်တို့မှာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုအနေနဲ့လိင်ဆက်ဆံတာထက်ပိုပြီးပျော်မွေ့ပါတယ်။ သူမကိုစနစ်တကျမဝင်နိုင်ခြင်းကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုမွေ့လျော်စေပြီးသူမကိုလူတစ် ဦး အနေနှင့်ကြည့်ရှုရန်၊ သူနှင့်သိကျွမ်းလာရန်နှင့်ဆွဲဆောင်ရန်ဖြစ်လာစေသောနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်အားအတင်းအကျပ်စေခိုင်းခဲ့သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ သူမနှင့်သူမ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှရှုထောင့်။
ငါကသူ့ကိုအား, စိတ်အားထက်သန်ချစ်ခြင်းမေတ္တာစေလိုသော, ငါသည်သူမ၏ရည်းစားဖြစ်ချင်ရာခေလနှင့်အတူမေတ္တာ၌ကရြောကျချင်တယ်။ သူ့ကိုငါမယုံနိုင်လောက်အောင်ငါ့အလိင်တံသည်မည်မျှကြီးမားသောနဲ့ Hard ခြင်းဖြင့်နှိုးဆွဖြစ်လာချင်တယ်။ ငါလိင်ပျော်စရာနဲ့ပျော်စရာကျွန်တော်တို့ကိုနှစ်ဦးစလုံးနှင့်သာမကဘဲသူမ၏ဖြစ်ချင်တယ်။
သူမသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြု၊ အခြားအရာများကိုအာရုံစိုက်ခြင်းမရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်၏အသံကိုကျွန်ုပ်မကြိုက်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်သည်။ အဲဒီအချိန်မှာ YBOP ကိုငါမတွေ့ခဲ့ဘူး၊ ငါစွဲနေတယ်။ ကျွန်မရဲ့စွဲလမ်းမှုကိုလေ့လာပြီးတွေးတောဆင်ခြင်ပြီးနောက်ငါအဲဒီလိုလုပ်ချင်တယ်၊ သူလည်းသူမကိုလည်းတန်ဖိုးထားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်သူမကိုကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်နှုတ်ဖြင့်ကျေနပ်စရာကောင်းသောပြnoနာမရှိပါ။ သူမနှစ်သက်လျှင်သူမကဲ့သို့ကျွန်ုပ်ကိုလည်းထိတွေ့နိုင်သည်။ သို့သော်ရိုးရိုးလေးမှာကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင် PMO မဖြစ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ငါ့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောညစ်ညမ်းမှုအရင်းအမြစ်ကတော့ငါ့လက်ပ်တော့ပ်ပေါ်ကအင်တာနက်ပဲ။ ပုံနှိပ်ထားတဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့နေရာမရှိ၊ ငါ့ hard drive ထဲမှာဖိုင်တွေသိမ်းထားတာမရှိဘူး။ ၎င်းသည် ၀ က်ဘ်ပေါ်ရှိအားလုံးနှင့်ကလစ်အနည်းငယ်နှိပ်ရုံဖြင့်ဝင်ကြည့်နိုင်သည်။ ဒါဟာခိုင်မာမှုရှိနေခြင်းနဲ့ရာခေလနဲ့ငါ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအားမလျှော့ခြင်းနှင့်အားနည်းခြင်းအတွက်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုအနေနဲ့အသုံးပြုခြင်းရဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျော်လွှားရမည့်နောက်ထပ်အရာတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်၏လိင်နှင့် porn အကြောင်းပုံများကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ဒါဟာတကယ်တော့မဆိုးပါဘူး ယခုမှစ။ ထိုကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုငါ့ခေါင်းကိုပေါ်လာသည့်အခါငါပဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထုံးစံ၌သေချာပေါက်မဟုတ်, ရာခေလကိုစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။
ငါ masturbate ချင်သည့်အခါယခုငါ 20 ၏အစုံများအတွက်ရည်ရွယ်အစားစာနယ်ဇင်း ups ပြုလိမ့်မည်။ ဤသည်ငါ့ကိုပိုကောင်းကိုကြည့်ပြီးပိုယုံကြည်မှုခံစားရပါစေ, တစ်အာရုံအဖြစ်အစေခံရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်တက်ကိုသုံးပါ, ငါထို့နောက်အားကစားရုံသို့မဟုတ်စစ်မှန်သောအသက်တာ၌အသုံးပွုနိုငျကွောငျးကိုကြွက်သားနှင့်အစွမ်းသတ္တိကိုတညျဆောကျ, ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုကိုကူညီလိမ့်မယ်။
ငါအလုပ်ပြန်လာသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ရုံးခန်းများ၊ ၀ ါသနာများအားလုံးနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီး၊ ဤ PMO ဒိုင်ယာရီကိုပြင်ဆင်ခြင်း၊ ချက်ပြုတ်ခြင်း၊ စျေး ၀ ယ်ခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စများကိုလုပ်ခြင်း၊ အမေနှင့်တွေ့ခြင်း၊ မိတ်ဆွေများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း ငါ porn နှင့်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းပစ္စယစဉ်းစားဖြုန်းဖို့အချိန်အများကြီးမရှိကြပါဘူး။
အာရုံစူးစိုက်မှုဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်လွှဲခြင်းကရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်အတူအဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။ ငါအခက်ခဲဆုံးအချိန်ကငါတစ်ယောက်တည်းရှိနေတဲ့ညမှာအိပ်ပျော်သွားမှာပါ။ ငါတစ်ခြားမျှမျှတတအိပ်ပျော်သွားအောင်ကူညီပေးဖို့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကအခုတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ ငါအတူတူအိပ်တဲ့အခါမှာအနည်းဆုံး sexy ညဝတ်အင်္ကျီဘောင်းဘီတိုဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာကိုရာခေလကိုခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မယ်။
YBOP ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာကိုဖော်ထုတ်ရန်ကျွန်ုပ်သည်အမှန်တကယ်အားဖြင့်ပီတိဖြစ်ကာစိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။ ၎င်းသည်စစ်မှန်သော site တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်သိပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် (က) ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အရာကိုမဆိုရောင်းရန်သို့မဟုတ်မည်သည့်အရာအတွက်မဆိုစာရင်းသွင်းရန်မကြိုးစားသောကြောင့်၊ (ခ) အခြားသူများ၏ဆောင်းပါးများနှင့်အကောင့်များကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုသောအခါ၊ ငါသူတို့ပြောနေတာတွေနဲ့အကြီးအကျယ်ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပြီးငါ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံနဲ့သိပ်ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ငါ ၁၀၀% သေချာတယ်ဆိုတာဒီငါခံစားနေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခပဲ။
၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းဆေးကုသမှုသည်နှစ်ပေါင်းများစွာနောက်ကျနေသောကြောင့်သင့်ဆရာဝန်ကသင့်အားကူညီနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်သောကြောင့်အင်တာနက်တိုးတက်ပြောင်းလဲနေသောနှုန်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုမရှိနိုင်ပါ။ ယောက်ျားများစွာသည်ဤရောဂါခံစားနေရပြီး၊ porn နှင့်ပတ်သက်သော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုလမ်းကြောင်းသည် broadband အင်တာနက်အမြန်နှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုကိုထင်ဟပ်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။
ဒါကကျွန်တော့်ဒိုင်ယာရီထဲပထမဆုံးထည့်ဝင်တာပါ။ ရှည်လျားပေမယ့်ဖြစ်ရမယ်။ ယခုမှစ။ entries တွေကိုတိုတောင်းပေမယ့်ငါ့အခံစားချက်တွေကို, အတွေးများ, ဖြစ်ရပ်များနှင့်အပြောင်းအလဲများကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့လုံလောက်တဲ့အသေးစိတ်နေဆဲပါလိမ့်မယ်။
ကောင်းပြီဒီမှာငါအသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်ကတည်းကစကြည့်သည်။ ၁၇ ပေါ့။ ငါက porn ကိုကြည့်နေတာပဲ။ ဒါပေမယ့်အခုနှစ်နှစ်လောက်ကြာရင်ငါမပါရင်တောင်မှ porn မပါဘဲတောင့်တင်းလာတယ် ****** ပြီးခဲ့တဲ့ညကလိုစိတ်ပျောက်သွားတယ်ဒီ ၆ နှစ်သားအရွယ်ကတည်းကငါကောင်မလေးကို **** ကိုတောင်းစားနေတုန်းပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါကအဲ့ဒီအခြေအနေကနေထွက်ဖို့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုပေးခဲ့ရတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိမထားမိလျှင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမနေထိုင်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် porn ကိုကြည့်ခြင်း၊ လူရှုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်တစ်ပတ်ခွဲခွဲလိုမျိုးစောင့်ကြည့်ခြင်းမပြုရသေးပါ။
အမှန်တကယ် porn ကိုကြည့်မရဒီတူညီတဲ့ ******** စသည်တို့ကိုနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်တူညီအသက်အရွယ်န်းကျင်မည်သူမဆိုကြောင့်နောက်ကျောကိုမှန်ကန်လိင်ဆက်ဆံနိုင်ဖြစ်ခြင်းဖို့ကြာပေဘယ်လောက်ရှည်ရှည်အလုပ်လုပ်တယ်လျှင်မှတ်ချက်များကိုအလွန်တန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်လို့ LINK
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်တွင်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှုကိုစတင်ခဲ့သည့် ၁၉ နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ အစပိုင်းမှာတော့သူဟာ ၀ တ်ပြုနေတဲ့ပုံရိပ်တွေသာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တကယ်မစဉ်းစားတဲ့အရာတွေကတော့ Victoria's Secret ဝဘ်စာမျက်နှာလိုမျိုးဆိုးတာပဲ။ ထိုအခါငါအသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်တွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုသင်ယူခဲ့ရသည်၊ သို့သော်ထိုစဉ်ကကျွန်ုပ်၏အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုသည်ဗီဒီယိုများအလွန်မြန်ဆန်စွာမစီးဆင်းနိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်အများအားဖြင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းနှင့်စိတ်ကူးယဉ်မှုများဖြင့်အရှိန်မြှင့်ခဲ့သည်။ ထူးဆန်းတာကအဲဒီအချိန်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမကြည့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တက်ကြွစွာမရှာဖွေခဲ့ဘူး။ ဟင့်အင်း၊ ငါဟာအချိန်အတော်ကြာအဝတ်အချည်းစည်းအမျိုးသမီးတွေကိုမြင်ရဖို့ ... မလွယ်ကူသေးဘူးလို့ခံစားခဲ့ရတယ်။
သို့သော်ယခုငါနားလည်သဘောပေါက်လာသောအခါ“ နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း” ဟုငါယူဆသောအပြုအမူမျိုးသည်သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်တွင်ဖတ်ခဲ့သောပြmanyနာများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ တစ်နေ့ကျတော့ကျွန်မရဲ့လိင်တံဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာရုတ်တရက်သဘောပေါက်လိုက်တယ်။ တစ်နှစ်ခန့်အကြာတွင်သူတို့မကြာခဏရှိခဲ့ကြောင်းကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတိရမိသောအခါမည်သည့်နံနက်သစ်သားမျှမရှိခဲ့ပါr ။ Semi- ဝတ်လစ်စလစ်ပုံရိပ်တွေငါ့ကိုနှိုးဆွ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဆုံးရှုံးစတင်, ငါတူညီတဲ့အမြင့်ဆုံးရဖို့ပဲသူတို့ထဲကပိုကြီးပြီးပိုကြီးတဲ့ပြခန်း browse ခဲ့ရသည်။ ငါရရှိရန်ကြိုးစားခဲ့သောစိုက်ထူမှုများသည်ယခင်နှင့်မတူခဲ့ပါ။ သူတို့ဟာအသက်ရှင်နေတယ်လို့မခံစားရဘူး၊ သူကိုယ်တိုင်ကသူရဲ့“ စိတ်သဘော” နဲ့တုန်ယင်နေတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်တစ် ဦး အတွက်တော့ဒီဟာကအရမ်းလေးနက်တဲ့ပြproblemနာဖြစ်တယ်လို့ငါထင်ခဲ့တယ်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ဘဝ၏အဆိုးဆုံးအခြေအနေတွင်ရှိနေသည်ဟုထင်သော်လည်းကျွန်ုပ်မခံစားမိပါ။ နောက်ဆုံးတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော့်မိဘတွေကိုပြောပြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သူတို့ကတစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာဆရာဝန် ၃ ယောက်နဲ့သွားတွေ့တယ်။
ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ testosterone ဟော်မုန်းပမာဏကိုစစ်ဆေးရန်သွေးစစ်ဆေးမှုကိုခံယူပြီးဆီးကြိတ်ကိုလည်းစစ်ဆေးသည် (urgh ၏မနှစ်မြို့ဖွယ်ပထမအတွေ့အကြုံ) အဆုံးမှာတော့သူကကျွန်တော့်ကိုကိုယ်ကာယချို့ယွင်းချက်ဘာမှမခွဲခြားနိုင်ဘူး။ တကယ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့“ စမ်းသပ်” တာကလွဲလို့သူနောက်ထပ်လုပ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူး။ သူကငါဟာပိုပြီးညစ်ညမ်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ဖို့ငါ့ကိုအားပေးတယ်၊
ဒုတိယတခြားအနာရောဂါအဘို့သွားရောက်ခဲ့ပေမယ့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ့အပြဿနာအကြောင်းကိုကြားပြောသောဆရာဝန်အချို့နဲ့အခြားမျိုးဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်တဖန်ကိုယ်ထိလက်ရောက်ဘာမှမမှားဖော်ထုတ်မယ်ပြီးနောက်သူတစ်ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောပါရဂူမှငါ့ကိုရည်ညွှန်းပါတယ်။ ဒီအနှောက်နှင့်အာရုံကြောပါရဂူ, ငါ့ဦးနှောက်ပြဿနာများရှိခြင်းတခဲ့လျှင်ကြည့်ဖို့ငါ့ကိုအပေါ်တစ်ဦး fricking MRI ပြု. , နောက်ဆုံးအကြိမ်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘာမှမမှားကိုမြင်လျှင်, kinda ငါ့ကိုထိုကဲ့သို့သောခရစ်ယာန်တစ်ဦးအဖြစ် masturbating အကြောင်းကိုအပြစ်ရှိတယ်ရှိခြင်းမဘာသာရေး-ish အကွံဉာဏျကိုပေးတော်မူ၏။ ဤအရာအလုံးစုံဆရာဝန်များကငါ့ကိုငါဒါအသည်းအသန်လိုအပ်သောအဖြေကိုပေးစေခြင်းငှါအလျှင်းမလိုပြောလောက်ငါခံစားရတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းသည်ရုပ်ပုံများမှ“ ပုံမှန်” လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုကူးပြောင်းသွားသည့်မကြာသေးမီနှစ်များသို့အလျင်အမြန်ရောက်ရှိလာပြီးကျွန်ုပ်ဘဝသည်တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအထက်တန်းကျောင်းပြီးခါနီးပြီ၊ ရုတ်တရက်ကျွန်တော့်ဘဝဟာတုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ကောင်းသောအချိန်တွေကုန်လွန်သွားသည်နှင့်ရုတ်တရက်ခံစားမိလိုက်သည်။ ငါစိတ်ဓာတ်ကျပြီးအထီးကျန်သလိုခံစားရတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော့်ကိုတည်မြဲတဲ့စိတ်ငြိမ်သက်မှုဘာမှပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဤအချိန်အတောအတွင်းကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများနှင့်ဆေးဝါးကုသမှုခံယူခဲ့သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုဆိုးရွားသည်ဟုခံစားရသော်လည်းချက်ချင်းပင်ကျွန်ုပ်၏ဘဝတွင်ခံစားခဲ့ရသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာဟုစဉ်းစားသည်။ ငါကြိုးစားရခက်တဲ့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းကတော့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနေစဉ်အတွင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ငါ့စတိုင်ကစေးကပ်ခြင်းနှင့်အတူခြောက်သွေ့သောကြမ်းတမ်းသောချုပ်ကိုင်မှုသို့ပြောင်းလဲသွားသည်ကိုသတိပြုမိခဲ့သည်။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်သည်လုံးဝမခက်ခဲသောလိင်တံဖြင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤအချက်အားဖြင့်ငါခိုင်ခံ့သောစိုက်ထူခြင်းနှင့်တူသောအရာကိုခံစားခဲ့ရနီးပါးမေ့လျော့ခဲ့သည်။
အဲဒီနောက်လအနည်းငယ်အကြာမှာ YBOP ကိုစိတ်ပညာဆောင်းပါးတစ်ခုမှာထိမိလဲပြီးချက်ချင်းပဲကျွန်မရဲ့သံသယအားလုံးပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။ တစ်နည်းပြောရရင်ကျွန်မစိတ်သက်သာရာရသွားပြီးကျွန်တော့်ရဲ့ပြproblemနာကအဆန်းတော့မဟုတ်၊ လုံလောက်တဲ့အားစိုက်ထုတ်မှုနဲ့အချိန်နဲ့အလွယ်တကူဖြေရှင်းလို့ရတယ်။ ရောဂါပျောက်ကင်းဖို့မျှော်လင့်ချက်လုံးဝမပေးခဲ့ဖူးဘူး၊ ဒီပြproblemနာကိုကျွန်မရဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့လိင်မှုဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးဖြတ်သန်းရမယ်လို့ထင်ခဲ့တယ် ယခုတွင်ငါသည်တက္ကသိုလ်မတိုင်မီပညာရပ်ပြီးဆုံးချိန်တွင်ယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုရိတ်သိမ်းခြင်းဖြင့်အောင်မြင်သော reboot ကိုပြီးအောင်လုပ်ရန်စိတ်ထဲထားလိုက်သည်။
လောလောဆယ်ငါ reboot ၏ 14 နေ့၌ငါဖြစ်၏။ ငါကအစမတိုင်ခင် ၁၁ ရက်ကစပြီးပြန်တက်လာတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါပြန်မသွားတော့ဘူး၊ ၂ လကြာအောင်ငါသွားနေတယ်။ ငါ့ဘဝမှာသိသာထင်ရှားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေစတင်ပေါ်ပေါက်လာတာကိုမြင်ရလို့အရမ်းဝမ်းသာတယ်။ အခုအားကစားခန်းမမှာခဏခဏလေ့ကျင့်ခန်းကောင်းကောင်းလုပ်ဖို့ကျွန်တော်မပျင်းပါဘူး။ အရင်ကလိုမဟုတ်ဘဲတစ်နေ့တာကောင်းစွာမဖြစ်လျှင်ငါစိတ်ဓာတ်မကျဘဲနေ၏။ ကျွန်ုပ်၏နေ့စဉ်ဘ ၀ နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုတက်ကြွသောခံစားမှုရှိသည်။ ငါဒီထက်ပိုပြီးလေ့လာဖို့လိုကောင်းကောင်းအသုံးချရသေးပေမဲ့အမြဲတမ်းမောပန်းနေပြီးမြူဆွယ်နေတဲ့ခံစားမှုမျိုးကိုမခံစားရဘူးလို့ခံစားရသည်။
ဒါပေမယ့်ဒါဟာသေချာတဲ့ခက်ခဲတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပါ။ ၁၄ ရက်ကိုပြန်ဖွင့်လို့ပြောရင် M နှင့် O. တို့အတွက်သာဖြစ်တယ်။ မကြာသေးမီရက်တွေတုန်းက porn ကိုကြည့်ချင်စိတ်ကအရမ်းလွှမ်းမိုးနေပြီး Maxim နှင့် Nuts အဖုံးအချို့ကဲ့သို့အနည်းငယ်ကြည့်လိုက်သောအခါညစ်ညမ်းသောအကျင့်ကိုရှောင်ခြင်းသည် 14 ရက်သို့ပြန်သွားသည်။ သို့သော်အနည်းဆုံး M နှင့် O မပါလျှင်ကျွန်ုပ်သည်သုံးလုံးစလုံး၏ကုန်းနေကျသံသရာအတွင်းသို့မရောက်ရှိနိုင်တော့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် porn ကိုရှာဖွေခြင်းမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုရပ်တန့်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ သို့တိုင်၊ ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်သည်ယနေ့တွင်မရပ်မနားညည်းတွားနေပြီး၊ ငါပြေးတာနဲ့“ နံရံကိုရိုက်တာ” လိုမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ထင်တယ်။ တကယ်တော့သင့်မှာစွမ်းအင်လုံလုံလောက်လောက်ရှိပေမယ့်သင့် ဦး နှောက်ကရပ်တန့်ဖို့ပြောနေတာဘယ်အချိန်လဲ။ ဒါပေမယ့်မင်းကအဲဒီနံရံကိုဖြိုခွဲနိုင်ရင်စွမ်းအင်ကိုခံစားရပြီးမရပ်မနားဆက်သွားနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်ယခုငါဆက်လက်ရှောင်ရှားနိုင်သကဲ့သို့ခံစားရတယ်ဒါပေမယ့်ငါ့ ဦး နှောက်ငါ့ကိုငါမူးရူးဖို့တောင်းဆိုနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနံရံကိုငါချိုးလိုက်တာနဲ့ငါ့ ဦး နှောက်ကငါ့ကိုအနှောင့်အယှက်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး၊ ငါ reboot ကိုပဲအာရုံစိုက်နိုင်မယ်လို့ငါမျှော်လင့်တယ်။
ဒါ့အပြင်တွန်းအားတွေကြောင့်အာရုံမပျံ့လွင့်စေဖို့လုံလောက်တဲ့ပစ္စည်းတွေမရှိခြင်းရဲ့အန္တရာယ်ကိုသဘောပေါက်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီနေရာမှာဂျာနယ်တစ်စောင်စဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ တစ်ဖန် ထပ်မံ၍ YBOP နှင့်ကျွန်ုပ် reboot လုပ်ခဲ့သောသူများ၏အောင်မြင်သောအကောင့်များသို့ပို့ဆောင်ခံရခြင်းကြောင့် ၀ မ်းသာမိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ဘဝကိုပြန်စပြီးယခုအချိန်အထိအပြည့်အဝနေထိုင်ရန်မျှော်လင့်ချက်ကြီးမားစွာပေးခဲ့သည်။
ဒီနေရာမှာ porn မပါဘဲဘဝကိုပါပဲ
တစ်ကြိမ် 1 နေ့က, ဒီငရဲထဲကရယူခြင်း။
ဟေ့ဒီမှာငါ ၂၁ နှစ်အရွယ်ပေါ့။ အခုငါထင်ထားတာက HOCD က ED ကနေထွက်လာတာ။
လွန်ခဲ့သော (၃) လကဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်မအလွန်ဆင်းရဲဒုက္ခခံစားခဲ့ရပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ဘဝကိုအတော်အတန်ပျက်စီးစေခဲ့သည်။ ငါယုံကြည်မှုတွေအားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်၊ ငါ့မျှော်လင့်ချက်တွေအားလုံးကိုငရဲထဲပြန်ရောက်သွားခဲ့တယ်။ ဒီဇန်နဝါရီလကငါ့ကိုပထမ ဦး ဆုံးထိမှန်သောအခါငါကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်အတူဘာလုပ်ရမှန်းမသိခဲ့ပါ; ၆ ရက်တာကာလအတွင်းကျွန်ုပ်သည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတော်တော်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည် (ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ အဆိုးဆုံးအပိုင်းမှာကျွန်ုပ်သည်ယနေ့ခေတ်စာမေးပွဲများတွင်ထိုင်နေခြင်းပင်ဖြစ်သည် - ၎င်းတို့သည်အကြွင်းမဲ့အိပ်မက်ဆိုးဖြစ်သည်။ )
ငါခံစားခဲ့ရသောစိတ်ဖိစီးမှုသည်ကုလားအုတ်များကဲ့သို့သောကျိုးပဲ့ပျက်စီးစေသည့်ကောက်ရိုးဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ သာမန်အခြေအနေတွေမှာငါသူတို့ဘယ်လောက်မှားယွင်းနေတယ်ဆိုတာကိုသိပြီးဒီအတွေးတွေကိုဟန့်တားလိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဒီကာလတစ်ဝိုက်မှာငါအရမ်းအားနည်းနေတဲ့အတွက်ငါစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအရေးပါမှုကိုပေးခဲ့တယ်။ ဒါကကျွန်တော်မလုပ်မိစေချင်တဲ့အမှားကြီးပဲ။ အဲဒီအချိန်ကတည်းကဒီစဉ်ဆက်မပြတ်သံသယကနေတစ်နေ့ထွက်မသွားခဲ့ပါဘူး။ ငါစာသားစဉ်ဆက်မပြတ်ဆိုလို။ ငါဒီ OCD အမျိုးအစားနှင့်ဆက်စပ်သောကြောက်မက်ဘွယ်သောအတွေးမျိုးအချို့ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့သည့်ကာလတစ်ခုတည်းရှိခဲ့သည်။
စာမေးပွဲကာလပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော့်ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုအဆင့်ကအစပိုင်းမှာကျသွားပြီးကျွန်တော်ဟာနေ့စဉ်စိတ်ပူပန်မှုမဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်ကျွန်တော်ဟာအလွန်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ (နှင့်အလွန်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ကြောက်ရွံ့မှုမြင့်မားတဲ့) နေ့စဉ်နဲ့အမျှနေ့စဉ်ခံစားနေရပြီးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းနာရီပေါင်းများစွာနေခဲ့ရသည်။ ဤအရာအားလုံးသည်အဘယ်ကလာခဲ့သလဲဆိုတာအဘယ်အရပ်မှ ruminating နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်။ အလေးအနက်ထားလိုပဲဘယ်မှာအပေါ် မြေကြီးတပြင် ငါဒီအတွေးတွေကနေရခဲ့တာလား။ ဘယ်လိုငရဲသူတို့ပေါ်လာခဲ့တာလဲ ငါအတိတ်ကာလ၌ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ deviant ၏ဘယ်လောက်အပြည့်အဝကောင်းကောင်းသိ။ ငါသည်ငါ့လိင်တူဆက်ဆံခြင်းဝိသေသလက္ခဏာနှင့်ပတ်သက်ပြီးအမြဲတမ်းခိုင်မာပြီးယုံကြည်မှုရှိတယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်။
ဦးနှောက်နှင့်လိင်တံ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များကို၏အမြင်အာရုံကြားဆက်ဆံရေးနဲ့ဆက်ဆံရေး / ဆက်သွယ်မှုရှိလျှင်မင်္ဂလာပါကျနော်အံ့သြခဲ့ပါတယ်။ လူတနှိုးဆော်ခြင်းအခါနှင့်အတူဝငျရောကျစှကျသို့မဟုတ်အားပေးစေခြင်းငှါလိင်စိတ်သို့မဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုတိုးပွားစေတဲ့ဓာတုတုံ့ပြန်မှုလည်းမရှိ ??
ငါသည်လည်းအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည့်ပြproblemsနာများ၊ မူလပိုစတာနှင့်သူ၏ပြproblemsနာများနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၄၀ ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်သော်လည်းဆေးဝါးကုသမှုခံယူသူနှင့်လိင်ဆက်ဆံလိုသူ၊
porn ငါ့ကိုလှုံ့ဆော်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါ့ထံသို့လာမယ့်အချည်းစည်းအမျိုးသမီးတဝက်အစုလိုက်အပြုံလိုက်စိုက်ထူထုတ်လုပ်သည်။ ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းစိုက်ထူနေဆဲ 18 နှစ်အရွယ်အစိုင်အခဲ !! ဖြစ်ကြ၏ (မကောင်းတဲ့ဥပမာ, ဒါပေမယ့်ငါမှတ်မိ) ဒါပေမယ့်သင်ကရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ငါဟာဓာတုစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုစွဲလမ်းနေတယ်၊ ​​MAN .. စွဲစွဲလမ်းလမ်းတစ်ခုလို့ခံစားမိပြီး၎င်းသည် TON ကိုနှစ်သက်သည်။ ငါမကြာခဏနေ့စဉ် 1-5 ကြိမ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေ !!, လွန်ခဲ့သောအနှစ် 20-25 အဘို့,! (အနည်းဆုံးတစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက်လျှင် ၅ ရက်) ကျွန်ုပ်သည် porn နှင့် masturbating ပုံစံကိုချိုးရန်လိုအပ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အလွန်ခက်ခဲသည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်နှင့်ငါ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုအနှောင့်အယှက်ပေးသောကျွန်ုပ်၏ဤပြproblemနာကိုမှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းဖြင့်ညွှန်ပြနိုင်ပါသလား။
ဟေ့, ဒီကဒီမှာကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးပို့စ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့မင်္ဂလာပါလူတိုင်းအတွက်။
နောက်ခံသမိုင်းအကျဉ်းတစ်ခုပေးပါမယ်။ MB ကိုကျွန်တော်မတော်တဆရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်၊ ကျွန်မအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ၊ ဒါပေမယ့် ၁၀ နှစ်ကနေ ၁၂ နှစ်ကြားဖြစ်မယ်လို့မထင်ပါဘူး။ အဲဒီအချိန်ကကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာအပြည့်အဝနားမလည်ခဲ့ပါဘူး။ အဘယ်သူမျှမအော်ဂဇင်ရှိခဲ့သည်လည်းမရှိ။ ၎င်းသည်အသက် ၁၉ နှစ်အထိနေ့တိုင်းနီးပါးဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၂ နှစ်ဖြစ်သည်။ ငါစုံတွဲတစ်တွဲလလောက်အကြာငါ၏အပြဿနာသဘောပေါက်, ပြီးတော့ကတည်းကငါအတိတ်နှစ်လအတွင်းနှစ်ကြိမ် masturbated (ကျနော်သို့သော်ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်မီ, ငါကို MB အများကြီးလျော့နည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းတစ်ချိန်ကတစ်ပါတ်, လျှင်, နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးလကြိုတင်ရန် ငါ၏အတာဝန်ရှိသူတဦး) ရက်စွဲကိုဖြတ်။ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးသောကာလကတည်းကတစ်လကျော်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါလျောက်ပတ်သောမိန်းမအရေအတွက်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြပြီးသူတို့အားလုံးသည်စိုက်ထူမှုရရှိခဲ့သည့်အတွက်အလွန်ခက်ခဲခဲ့သည် (Ironic, right? ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်သူသို့မဟုတ်သူမထံမှလက်ဖြင့်နှိုးဆွရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ခဏသွားရန်ခက်ခဲနိုင်သည်။ ) စုံတွဲတစ်တွဲမိနစ်, ဒါပေမယ့်ငါကဆုံးရှုံးချင်ပါတယ်။ ဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအပေါ်တကယ့်ထိခိုက်နစ်နာစေခဲ့တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကငါ့ကိုဘာကြောင့်အလုပ်မဖြစ်တာလဲဆိုတာကိုငါတကယ်နားမလည်ခဲ့ဘူး။ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုငါဖတ်ပြီးတာနဲ့၊ ဒါဟာအားလုံးပြီးပြည့်စုံသောအဓိပ္ပာယ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုကြည့်တာကိုရပ်နားလိုက်ကတည်းကပြီးခဲ့တဲ့တစ်လလုံးအတွက်မနက်ပိုင်းစိုက်ထုတ်မှုတွေလုပ်နေတာတွေ့ရတယ်။ ငါဖတ်ခဲ့တာကကောင်းတယ်။ ငါသည်လည်းပိုပြီးလူမှုရေးအရတက်ကြွခံစားရတယ်။ ငါထွက်သွားတဲ့အခါငါအရင်ကမလုပ်ဖူးတဲ့မိန်းမတွေနဲ့လိင်ဆက်ဆံချင်တဲ့စိတ်ကိုခံစားရတယ်။ ငါမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့တော့သူ့ကိုငါသဘောကျတယ်ဆိုတာသိပေမဲ့သူတို့နဲ့လိင်ဆက်ဆံချင်တဲ့စိတ်ကိုငါမခံစားရဘူး။ ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ကစဉ်းစားနေသလိုပဲ၊ ဒီမိန်းကလေးဟာဆွဲဆောင်မှုရှိပေမယ့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ အခုဆိုရင်ငါပါတီပွဲတွေမှာမိန်းကလေးတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတက်တက်ကြွကြွကြိုးစားပြီးအောင်မြင်နေတယ်။ ၎င်းသည်ယခင်ကထက်သဘာဝနှင့်ပျော်စရာများစွာခံစားရသည်။
သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်စေသောကြီးမားသောအရာတစ်ခုရှိသည်။ စိုစွတ်သောအိပ်မက်များ။ ငါ PMO မှရှောင်ကြဉ်ကတည်းကနှစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏စိုစွတ်သောအိပ်မက်နှစ်ခုစလုံးတွင်ကျွန်ုပ်သည် porn ကိုကြည့်နေသည်။ ငါကဒီမိန်းကလေးတစ် ဦး နဲ့လွန်ခဲ့သောစုံတွဲလပေါင်းများစွာကြားကဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ဖူးတယ်၊ ကောလိပ်တက်ဖို့ဝေးနေလို့သီတင်းပတ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာသူမကိုမတွေ့ခဲ့ဘူး။ သူမစုံတွဲတစ်တွဲရက်အတွင်းလာလည်ပတ်တော့မည်။ ပြီးခဲ့သည့်ညက၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။ သူမနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ ၎င်းသည်ကြီးမားသောမျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်မနေ့ကငါအိပ်မက်မက်ခဲ့ဖူးသမျှထဲမှာကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်သာတဲ့အိပ်မက်တစ်ခုမက်ခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒါဟာတကယ့်အစစ်အမှန်လို့ခံစားမိတယ်၊ ငါနိုးနေပြီလို့ခံစားရတယ်၊ ငါအိပ်မက်ထဲမှာညစ်ပတ်နေတဲ့ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်တာကိုထိန်းချုပ်ဖို့တိုက်တွန်းအားပေးခဲ့တယ်၊ ငါအရှုံးပေးလိုက်တယ်။ ဒါဟာငါ့အိပ်မက်တွေထဲမှာတော်တော်လေးခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ဒီနေရာမှာငါဖတ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကမကောင်းဘူး (နိုးနေစဉ်မှာကြည့်နေပေမယ့်အိပ်မက်မက်နေစဉ် ??) ။ အော်ဂဇင်ဟာအစဉ်အမြဲငါခံစားဖူးသမျှထဲမှာအပြင်းထန်ဆုံးပါပဲ။ ငါအိပ်မက်ဆိုးမက်မက်သည့်ညစ်ညမ်းသောစိတ်ကူးစိတ်သန်းများနှင့်ဆက်နွှယ်နေသောဤပြင်းထန်သောအော်ဂဇင်ကကျွန်ုပ်ကိုသာပြန်ထားမည်ကိုစိုးရိမ်သည်။
ငါမေးနေသောမေးခွန်းမှာကျွန်ုပ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ဟုသင်ထင်သနည်း။ ဒီမနက်မတိုင်ခင်ငါသူမလာလည်တာနှစ်ရက်အတွင်းအားလုံးအလုပ်မလုပ်တော့ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်အရမ်းယုံကြည်တယ်၊ လွန်ခဲ့သော ၂ လတာကာလကိုရှောင်ရန်ငါထိန်းချုပ်သည်ဟုခံစားမိသောကြောင့်၊ ဤအရာအားလုံးသည်အိပ်မက်တစ်ခုအတွင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်သည်။ ငါစာသားအရ porn ကိုကြည့်ဖို့၊ ဒီအိပ်မက်ထဲကတစ်ချိန်တည်းမှာငါခံစားခဲ့ရသင့်တဲ့တွန်းအားတွေ၊ ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေအားလုံးလိုပဲ၊ ငါ့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုလည်းမထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ငါတကယ်ဒီရက်သတ္တပတ်ကြွလာသောအခါဖျော်ဖြေနိုင်ပါလိမ့်ချင်တယ်။ ငါတို့နှစ် ဦး လုံးသည်ဤအချိန်ကိုကြာမြင့်စွာစောင့်မျှော်ခဲ့ကြပြီးကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုမထနိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်စေလိမ့်မည်။
LINK - ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံစဉ် erectile disfunction နှင့်တိုက်ဖျက်နေသည့် ၂၃ နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီး၊ ယခု ၃ နှစ်ကျော်။ လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ခွဲခန့်ကကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသောဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်လာသည်။
အကြောင်းပြချက်များစွာအတွက် (အဓိကအားဖြင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ကြောက်ရွံ့မှုနှင့်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်တိုးတက်လိုသောဆန္ဒရှိခြင်း) ကျွန်ုပ်သည်တစ်ကိုယ်ရေဘဝနှင့်တစ်ကိုယ်ရေဘဝများ၌အမျိုးသမီးမိတ်ဖက်များမရှိဘဲနေခဲ့ရသည်။ ငါတစ်နေ့လျှင် ၂ ကြိမ်မှ ၃ ကြိမ်အထိအပြာအမျိုးမျိုးကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းခြင်းများသည်ကျွန်ုပ်၏ ED အတွက်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်ကြည့်နေသောညစ်ညမ်းပမာဏကိုလျှော့ချရန်နှင့် / သို့မဟုတ်လျှော့ချရန်အကြိမ်များစွာကြိုးစားခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်သိခဲ့ရသည် လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်အလွန်နှစ်သက်သောဤမိန်းကလေးနှင့်ကျွန်ုပ်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး၎င်းအားရိုက်ခတ်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ငါညံ့ဖျင်းဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျွမှုနထေိုငျပုံ
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာကျွန်ုပ်သည်တနင်္ဂနွေနေ့များတွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ သို့သော် Gary Wilson ၏ TEDx Talk နှင့် YBOP နှင့်နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကိုလေ့လာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်သကဲ့သို့၎င်းကိုကျော်လွှားနိုင်ပြီဟုခံစားရပြီးနောက်ခက်ခဲလိမ့်မည်၊ သို့သော်အနည်းဆုံးတော့တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါ။
မနေ့ကငါကတည်းက masturbated havent နှင့်ယခုငါမပါဘဲမှာအနည်းဆုံး 50 ရက်ပေါင်းနောက်ဆုံးမှအပေါင်။
လူကိုဟေ့, ငါသင်သည်သင်၏ခရီးပေါ်မှာရှိသမျှအကောင်းဆုံးကိုအလိုရှိ၏။ ကျွန်မတော်တော်လေးဆင်တူနောက်ခံမှလာကြ၏။ တကယ်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ငါ့ဆက်ဆံရေးအများစုအဖြစ်ကောင်းစွာသကဲ့သို့ငါ၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုဖျက်ဆီးခံရသည့်အကြောင်းကို3နှစ်ပေါင်း porn သွေးဆောင် ED နှင့်အတူရုန်းကန်။ ယခုမူကားရှိဘဝမှာသစ်တစ်ခုမိန်းကလေးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး, ငါသည်ဤအချိန်ကွဲပြားခြားနားအောင်ငါ့တန်ခိုးအတွက်ဘာမှလုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ငါတကယ် nofap ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာပြောင်းလဲနိုင်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကျူးလွန်နေဖို့ရန်ရှိသည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုတတ်နိုင်သမျှအဖြစ် nofap ၌ရှိသကဲ့သို့တက်ကြွနေဖို့နှင့်မလိုလားအပ်သောသွေးဆောင်ခြင်းမှဝေးနေဖို့ရန်သင့်အားတိုက်တွန်းပါသည်။ ကံကောင်းပါစေ! ငါသည်သင်တို့နှင့်သင်တို့၏အသစ်သောမိန်းကလေးတစ်ဦးကိုအတူတူပျော်ရွှင်မှုကိုရှာတွေ့မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
အသက် ၄၂ နှစ်ရှိပြီ။ အနာဂတ်မှာဖြစ်ပျက်မယ့်အရာတွေကိုသင်မြင်တဲ့အခါသင်တို့ရဲ့ကလေးငယ်အချို့ကိုရပ်တန့်သွားအောင်ကူညီပါလိမ့်မယ်
ငါ fapin ကိုမူလတန်းကျောင်းမှာငါတို့အများစုလိုစခဲ့တယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာတစ်ရက်လျှင် ၂-၃-၈ ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့သည် (ညစ်ညမ်းမဟုတ်ပါ။ အလွယ်တကူမရနိုင်ပါ) ကျွန်ုပ်သည်ကံကောင်းထောက်မစွာပင်ကျွန်ုပ်သည် HS နှင့်ကောလိပ်ရှိအမျိုးသမီးများနှင့်တော်တော်လေးကောင်းမွန်စွာရှိပြီးအသက် ၂၈ နှစ်အောက် ၁၄၀ ၀ န်းကျင်အိပ်ရာဝင်နိုင်ခဲ့သည်။ နေဆဲ avg2ကြိမ် / နေ့ fapping နေစဉ်။ ငါလိုချင်တဲ့အချိန်တိုင်း (ဘယ်နေရာမှာမဆိုငါငှားလို့ရနိုင်ပြီးမြန်နှုန်းမြင့်ကွန်ယက်ကအလွယ်တကူမရရှိခဲ့ဘူး။ ညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့ရုပ်ပုံများမရှိလို့ပါ) ၎င်းကိုငါထနိုင်ခဲ့သည်။
ထိုအခါငါ porn ချစ်သောသူမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်စတင်ချိန်းတွေ့! သူမကသူတို့ကိုငှားမှာပါ၊ ငါက fuckin ထီကိုအနိုင်ရခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့မြင်ကွင်းများထွက်ပြုမူလိမ့်မယ် .. လူဘဝမဆိုပိုကောင်းရနိုင်ဘူး။ ပြီးတော့သူမပတ်ပတ်လည်မှာမရှိတဲ့အချိန်မှာငါရုပ်ရှင်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်မိလိုက်တယ်။ တစ်နှစ်လောက်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဟာ porn ကိုအမြင်အာရုံကိုလှုံ့ဆော်မပေးရင် ED မှာပြtroubleနာရှိတယ်လို့သဘောပေါက်လာတယ်။ သူမသွားပြီးမကြာမီကျွန်ုပ်သည်မြန်နှုန်းမြင့်ကွန်ယက်ကိုရရှိခဲ့သည်။ အခုပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါကငါ့ဘဝမှာအကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုပဲ။ ငါပိုက်ကွန်ကိုပူဇော်ခဲ့ရတယ်အလုံအလောက်ရနိုင်ဘူး။
ငါ (porn မုန်းပေမယ့်မသောက်ရမှကိုခစျြသူ) အခြားမိန်းကလေးတစ်ဦးကသစ်ကိုကြီး cuz အဆိုပါလိင်ပထမဦးဆုံးမှာကြီးနှင့်သူမပူခဲ့ချိန်းတွေ့စတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါပညာရေး back..It ဟောက်လေ၏သို့သော်စုံတွဲတစ်တွဲလအကြာကယ့်ကိုသူမလိင်လိုချင် cuz လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ကိုစို့နဲ့ကျွန်မ porn လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ကိုကြည့်ချင်တယ်။ ငါ ED နှင့်အတူသွားကြဖို့ပြင်းထန်သောစွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအရက်မူးလာပြီတက်အဆုံးသတ်မယ်လို့နှင့်ဤငါသူမ၏နဲ့ငါ့ ED ဖုံးကွယ်နိုင်ပုံကိုပါလိမ့်မယ်, ကိုယ့်ငါဝီစကီဒစ်ခဲ့ဟုဆိုကာအသုံးပြုပုံပေမယ့်ယခုအားဖြင့် (အံ့သြစရာအံ့သြစရာ) ။ Viagra ဖြစ်စေပထမဦးဆုံးပေမယ့်မကြာမီကြောင်းမေ့သွားရောအလုပ်မှာအနည်းငယ်ကူညီပေးခဲ့သည်။ ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး, သူမမကြာမီကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လေးစားမှုအများစုနှင့်အတူသွားပြီခဲ့သည်။
ဤသည်ကား Porn စွဲတကယ်မြင့်မားသောဂီယာသို့ကန်သည့်အခါဖြစ်ပါသည်။ ဘားမှာမိန်းကလေးတွေရနိုင်သေးတယ်၊ ဒါပေမယ့် ED ကိုငါအရမ်းကြောက်တယ်၊ ငါမူးတော့မူးတယ်၊ အပြစ်ကြီးတယ်၊ လောကကချာ့ချ်စားချင်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ slope) စိတ်ဓာတ်ကျမှု (ကျွန်ုပ်ယခုနားလည်နေသောညစ်ညမ်းမှုကြောင့်) ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်အပေါ်တွင်ကြီးမားသောလွှမ်းမိုးမှုကိုရရှိခဲ့သည်။ သို့သော်ထိုညစ်ညမ်းမှုကကျွန်ုပ်အားစိတ်သက်သာစေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် fappin ကိုဆက်လက်ထားရှိခဲ့သည်။ ငါစိတ်ကျရောဂါထုံဖို့သောက်ခဲ့ပါတယ်။
ရှေ့သို့ ၁၀ နှစ်အမြန်ဆုံး။ ကျွန်ုပ်သည်ပေါင် ၅၀ ရရှိပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏အိမ်ဆုံးရှုံးခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ၂ dwi's ရရှိခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်၏အိပ်ရာတွင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး မရှိခဲ့ပါ။ လွန်ခဲ့သော ၃ ပတ်က YBOP ကိုကြည့်ပြီး porn ကိုကြည့်ဖူးခြင်းမရှိ။ သစ်ပင်များသည်စိမ်းလန်းစိုပြည်သည်၊ လေသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်၊ ငါလေ့ကျင့်ခန်းစတင်ခဲ့သည်၊ နေရာတကာတွင်လှပသောအမျိုးသမီးများရှိပြီးဘဝအပေါ်လုံးဝကွဲပြားသောသဘောထားရှိသည်။ ငါသည်ပျောက်ကင်းအောင်မသွားနိူင်တော့ပါ။ သို့သော်ဤပထမ ၃ ပတ်သည်လာမည့်အရာမှန်သမျှကိုဖော်ပြပါက၊ ဒါပေမယ့် .. ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းမှာကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးနံနက်သစ်သားကိုဒီနေ့မနက်မှာပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။ ကံကောင်းပါစေ guys..stay! နှင့်စာဖတ်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ငါဒါ 14 လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းဖြစ်ကောင်း7များ၏အသက်အရွယ်န်းကျင် PMO စတင်။ အစပိုင်းမှာတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မုန်းပြီးမယုံနိုင်လောက်အောင်အပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားမိမှာပါ၊ အဲဒါဟာနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းမှားယွင်းနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါလုပ်လေလေ၊ ငါဟာပိုပြီးသိသိသာသာလျော့နည်းလာလေလေ၊ ငါခံရတဲ့ခံစားမှုနည်းလေလေအပြစ်ရှိမှုလျော့နည်းလာလေလေဖြစ်တယ် ကကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်၏လျော့နည်းဖြစ်လာခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကအလွန်ဆိုးရွားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိကြောင်းသေချာသည်။ ကြီးမားသောကိစ္စမဟုတ်ပါ၊ PMO အများစုဖြစ်မည်၊ တခါတရံရက်သတ္တပတ်များစွာ။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အကုန်ပိုင်းမှာကျွန်တော့်ရဲ့အကောင်းဆုံးအိမ်ထောင်ဖက်ကသူနဲ့သူ့ရဲ့ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုရုတ်တရက်ပေါ်ပေါက်လာစေခဲ့တယ်။ သူကငါနဲ့အတူစကားပြောရတာအဆင်ပြေပြီး PMO ရဲ့ ဦး နှောက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအကြောင်းဆောင်းပါးအချို့ကိုပြခဲ့တယ်။
ငါဒီဆောင်းပါးတွေကိုဖတ်တဲ့အခါမှာရုတ်တရက်နူတ်နိုးသွားသည်နဲ့တူတယ်၊ ဒါကြောင့်သိသာထင်ရှားပြီးယုတ္တိရှိပုံရတယ်၊ PMO ကငါ့ကိုထိခိုက်နေတယ်၊ ​​ငါဒီသိသာထင်ရှားတဲ့အချက်ကိုရှောင်ရှားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊
ထို့နောက်ငါ PMO မပါဘဲခဏသွားပေမယ့်အအေးကြက်ဆင်သွားကြဖို့တော်တော်လေးခဲယဉ်းသည်နှင့်ငါအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြန်။ ငါ K9 ဘရောက်ဇာကို install လုပ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏အထက်ဖော်ပြပါသူငယ်ချင်းအားစကားဝှက်ပေးခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကြီးမားသောအထောက်အကူတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းသည်မှာအချို့သောပြသနာကိုကျော်လွှားနိုင်သည့်နည်းလမ်းများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ယခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းနည်းပါးသော်လည်း၊ fap ကိုရပ်တန့်ဖို့ခဲယဉ်းတယ်၊ ငါ့အကောင်းဆုံးက ၂ ပတ်လောက်ပဲ။ နောက်တစ်ခေါက်ငါကောင်းကောင်းလုပ်မယ်လို့ငါအမြဲပြောတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဟာသွေးဆောင်မှုထဲကိုအလွယ်တကူရောက်သွားတယ်
ငါမှာမိန်းကလေးစုံတွဲတစ်တွဲရှိခဲ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့အရမ်းပျင်းနေတယ်၊ ​​ငါသူတို့ကိုလှည့်ဖို့တောင်ရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်။ - ကျွန်ုပ်သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှက်ခြင်း၊ ငါကအကြောင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုတက်အလောင်းအစား - က PMO မှချသောဆက်သွယ်မှုအောင်မဟုတ်။ ငါနှစ်သက်သောလိင်မှုကိစ္စအသစ်များမှတဆင့်စက်လည်ပတ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်အလွန်ငြီးငွေ့နေသောကြောင့်ပျင်းနေကြောင်းထင်ရှားသည်။
ဒီအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ငါ့ PMO အလေ့အထတွေကြောင့်သမိုင်းကြောင်းအရမင်းသမီးတွေနဲ့တော်တော်လေးဆင်းရဲခဲ့တယ်။ ငါကြည့်ရတာမကောင်းဘူး။ ငါ့အတွက်ကောင်းတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ လူတွေဟာမိန်းကလေးတွေနဲ့ဘာကြောင့်ကောင်းမွန်တဲ့စံနှုန်းမရှိရတာလဲလို့လူတွေကမကြာခဏတွေးမိတယ်။ ဒါပေမယ့်အခွင့်အရေးတွေရလာတိုင်းငါအနိုင်ရသွားတာဟာအရမ်းကြောက်စရာကောင်းတယ် ' t ကိုသူတို့နှစ်သက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ငါမကြာသေးမီကအသက် ၂၁ နှစ်ပြည့်ပြီ။ P ကိုလျောက်ပတ်သောအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိခုခံတွန်းလှန်ပြီးနောက် PMO အပေါ်မကောင်းဆိုးဝါးထွက်သွားခဲ့သည်။ သို့သော်လည်းငါသည်ယခုအရွယ်ရောက်ပြီးအမှန်တကယ်မှန်ကန်စွာလုပ်ဖို့အချိန်ဖြစ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ငါဟာသွေးဆောင်မှုကိုတွန်းလှန်ဖို့အားနည်းနေတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာတယ်၊ ဒီတော့ငါဒီတစ်ခေါက်ထပ်ကြိုးစားမယ်။ ငါသွားရင်ထောက်ခံမှုရချင်တယ် ကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးရည်မှန်းချက်ကရက် ၃၀ ကိုရောက်ဖို့ပါ။ အဲ့ဒီကနေငါလမ်းကြောင်းပြောင်းဖို့မလိုချင်တဲ့ရက်အနည်းငယ်လောက်စုဆောင်းမိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ငါကြား၏ခဲ့သည် / r / nofap အရင်ကပေမယ့်ဒီနေ့အထိထုတ်စစ်ဆေးမပေးခဲ့ပါဘူး ငါ ybop အပေါ်အများကြီးဖတ်ပါ။ ငါငိုတော့မယ်
ငါအသက် ၃၀ ရှိပြီ။ အသက် ၈ နှစ်အရွယ်မှာငါရပ်နားချိန်တိုင်တိုင်ကိုတက်လိုက်ရင်ငါ့ရဲ့ dingdang ကိုကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ခံစားမိတယ်။ ငါနောက်ဆုံးမှာငါကိုယ့်ကိုကိုယ်တံခါးကို / သမျှ၏တိုင် / ခြမ်းအပေါ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတက်နှင့်ဆင်းဆွဲ၏အစားရုံဆွဲထုတ်နိုင်ကြောင်းထွက်နေသေးတယ်။ ကျွန်တော့်အိမ်မှာ ၁၃ နှစ်မှာ AOL ရှိတယ်။ အဲဒီ jpegs တွေကဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဖို့အမြဲတမ်းအချိန်ယူခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်မှာမြန်နှုန်းက ၁၇ မှာမြန်တယ်၊ ရုပ်ရှင်တွေကအရမ်းကိုများတယ်။ ထိုအခါငါကောလိပ်ကျောင်းသို့သွား။ အလင်းအိမ်ဆွဲထုတ်။
ကျွန်မရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကြားထဲမှာကျွန်မဟာအမှန်တကယ်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကျွန်မရဲ့ကောင်းကျိုးကိုကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ပုံရတယ်။ သို့သော်၎င်းသည်အမြဲတမ်းအလုပ်မလုပ်ခဲ့ပါ၊ ရံဖန်ရံခါအောင်ပွဲခံနိုင်သည့်အချိန်အတိအကျတွင်စစ်မြေပြင်မှပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့သည်။ ငါစံပြအရာများအပေါ်ကအပြစ်တင် - အရမ်းမူးတယ်, ကောင်မလေးအချို့ကိုယ်အလေးချိန်တက်အလေးပေး, etc, ငါဆင်ခြေတရားဝင်နှင့်ပုံမှန်ဖြစ်ကြသည်ထင်။ ကျွန်ုပ်အသက် ၂၀ အရွယ်ဆရာ ၀ န်ဆီသို့ကျွန်ုပ်၏ testosterone ဟော်မုန်းကိုစစ်ဆေးရန်စစ်ဆေးခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်လုံးဝပုံမှန်ဖြစ်ချိန်တွင်ဆရာဝန်သည်လူထုံမဟုတ်ခဲ့ပါ။
ငါသူမကြီးမြတ်တစ် ဦး ကောင်မလေးတစ်ယောက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ငါတို့ကယုန်လိုပေါက်ကွဲတယ် နောက်ထပ်ပြproblemsနာများမရှိပါ။ ပထမတော့မဟုတ်ပါ။ နောက် ၉ နှစ်အတွင်းမှာကျွန်မတို့အတူတူပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တယ်၊ ဝေးဝေးထွက်ပြေးခဲ့တယ်၊ လက်ထပ်ခဲ့တယ်၊ ပြီးတော့သူမကငါ့ကိုထားခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့လိင်ဆက်ဆံတာကိုရပ်လိုက်ရတယ်။ ငါသာယာတာပေါ့၊ ငါတို့လက်ထပ်ခဲ့ကြတာပါ၊ လက်ထပ်ထိမ်းမြားသူတွေမငိုကြဘူးလား? တစ်လသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းတစ်ကြိမ် သူမသည်ရံဖန်ရံခါအဒေါ်ဖလိုမှနောက်တစ်ခုသို့အလည်အပတ်ခရီးမသွားဘဲသွားရသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်ကငါကတက်ရရန် / တက်စောင့်ရှောက်ခြင်းပို။ ပို။ အခက်အခဲများရှိခြင်းစတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ကိုထိတ်လန့်စေခဲ့တယ် ငါအရမ်းကြောက်လာတော့ဒစ်က 9% မှာဘယ်တော့မှအလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။ ကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးနေ့၌ ၈၀% ရှိသည်။ ငါ့အဆိုးဆုံးအပေါ် 100%
ယခုတစ်နှစ်ခွဲကျော်တစ်ခုတည်း Been ။ ငါစိတ်ဓာတ်ကျခြင်းမှထွက်သွားပြီးနောက်ငါပြန်ခုန်ထွက်လာသည်။ အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်လှပသောအမျိုးသမီးအချို့ကိုခေါ် ယူ၍ အိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ မတက်နိုင်သို့မဟုတ်မအောင်မြင်နိုင်ပါ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနီးပါးအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်အရိုးအသစ်ကိုအရူးလုပ်တော့မည်ဟူသောယုံကြည်ချက်လွန်စွာစိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရကျွန်တော့်အမှိုက်ကနိုးပြီးနိုးလာတယ်။ ပြီးတော့နောက်လှိမ့်ပြီးအိပ်လိုက်တယ်။ အရမ်းကောင်းတယ်၊ ငါအသက် ၃၀ ပဲရှိသေးတယ်၊ ပြီးတော့ကျွန်တော့်ဒစ်ကသေပြီ။ ငါထင်တာတော့ဒါကအရင်ကကျန်ခဲ့တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုပဲ။ ဒါပေမယ့်တခြားအရာတစ်ခုရှိသေးတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ငါ porn ကြည့်ရှုသောအခါမှလွဲ။ အကြှနျုပျ၏ crotch ရုံ kinda သေပြီခံစားရတယ်။ ငါနှစ်အတွင်းနံနက်သစ်သားမရှိဘူးဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ် နှစ်များတွင်ကျပန်း boner ရှိခဲ့ဘူး။ CTRL-SHIFT-N ကိုထိသည်နှင့်တပြိုင်နက်စက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာ၌ကျွန်ုပ်သည်မာကျောပါသည်။
ငါလကြာကြောက်လန့်ခြင်းနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျခဲ့သည်။ ထုပ်ပိုးပြီးဘုန်းကြီးကျောင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ပဲလိုတော့တယ်။ ငါသူမနှင့်လိင်မဆက်ဆံနိုင်ပါကအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောဆက်ဆံရေးကိုမည်သို့ဖန်တီးနိုင်မည်နည်း။ အထူးသဖြင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသူများသည်ပေါက်ကွဲရန်ကြိုက်နှစ်သက်ကြသည်။ ဒါဟာသိပ္ပံပါပဲ။ ဆေးပြင်းတဲ့ဆေးကိုစမ်းကြည့်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမတတ်နိုင်ဘူး ငါကုထုံးကိုသွား၊ စကားပြော၊ စကားပြောပြီးငါဘယ်လောက်ကြောက်တယ်ဆိုတာပြောရင်ငါဖြစ်ပျက်တာကိုသိပြီးငါ့ ဦး ခေါင်းနဲ့ဘာမှားလဲဆိုတာကိုပြင်နိုင်တယ်။
ဒီနေ့ငါဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းတစ်ဒါဇင်နီးပါးအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုနေ့တိုင်းဖတ်ရှုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ သို့သော်မျှော်လင့်ချက်ရှိ၏။ ငါပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်သောမလုံခြုံသော၊ စိတ်ဓာတ်ကျ။ အားနည်းသော dicked အိတ်အစားနောက်တဖန်လူတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ငါလုပ်သမျှအကုန်လုံး“ ရပ်နားမှာတိုင်ကိုတက်” တာပါ။ ဒါကကျွန်တော့်ဘဝ (နှင့်ဒစ်) ကိုပြန်ပေးတဲ့အတွက်ဒါဟာငါလုပ်ခဲ့သမျှအလွယ်ကူဆုံးပဲ။ ငါတကယ်, ငါ့ဘဝ (နှင့်ငါ့ဒစ်) ပြန်ချင်တယ်။ အဲ့ဒါကကျွန်မငိုချင်တဲ့အတွက်အရမ်းပျော်တယ်
ငါ၏အ SO အဘို့ငါ 90 + စိန်ခေါ်မှုစတင်
ငါနှစ်နှစ်နှင့်လေးလနီးပါးကတည်းကငါ့အ gf နှင့်အတူရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၁၇ နှစ်ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည် ၁၁ နှစ်မှစ၍ လိင်တူချင်းဆက်ဆံခြင်းကိုမရပ်တန့်သေးပါ။ လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ကကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏အမှန်တကယ် gf တစ် ဦး ချင်းစီ၏အပျိုစင်ဘဝမှ ED ရောဂါခံစားခဲ့ရသည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်တစ်ပါတ်နှစ်ရက်သာသူမ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စကိုကျွန်ုပ်တွေ့မြင်သည်။ အရာရာကိုခွဲခွာပြီးနောက်ပထမဆုံးနေ့ကအရာရာတိုင်းပုံမှန်အလုပ်လုပ်သည်။ သို့သော်နောက်ရက်များ၌ကျွန်ုပ်သည်နံနက်သစ်သားထက်အခြားစိုက်ထူမှုတစ်ခုမဖြစ်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ gf သည်ကျွန်ုပ်ကိုရိုက်နှက်ခြင်းကိုမသိပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် porn ကိုကြည့်နေသည်ကိုမသိပါ၊ သူမဘယ်တော့မျှသိမည်မဟုတ်၊
ငါအောင်မြင်စွာ 07 / 03 နှင့် 07 / 13 အကြား fapping ရပ်တန့်ခဲ့ကြ, ငါလူတဖြစ်လာခဲ့ပါသည်တူသောဤအ 10 ရက်ပေါင်းစဉ်အတွင်းကျနော် (ခံစားခဲ့ရပါပြီtestosterone ဟော်မုန်းထပ်တိုးဒါမဟုတ်ဘူးလား?) ဒါပေမယ့် 07/14 မှာငါခံစားခဲ့ရတယ် Chaser အကျိုးသက်ရောက်မှု အရာခကျြခွငျးအကြှနျုပျ၏ nofap စွန့်စားမှုတော့ဘူး။
ငါဒီနေ့ subreddit အပေါ်ထိမိ။ လဲခြင်း, သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်ကအရာအားလုံးကိုဖတ်ခဲ့တယ် ဒါကြောင့်ငါ 90+ စိန်ခေါ်မှုကိုစတင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် fap၊ စကရင်၊ ကြည့်ခြင်း၊ ကြည့်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းသောစိတ်ကူးကိုရက်ပေါင်း ၉၀ ကြာအောင်ပြုလုပ်မည်မဟုတ်ပါ။ ထိုမှတ်တိုင်သို့ရောက်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်၏ gf နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုဆက်လက်ပြုလုပ်မည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အချိန်ကာလ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းကိုသတိပြုပါ Chaser အကျိုးသက်ရောက်မှု.
ငါကြိုတင်၌ငါ၏လုပ်ဘော်ဆောင်ဘက် fapstronauts ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ငါကဒီမျှ-FAP အရာဝန်းကျင်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအသိုင်းအဝိုင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
TL; DR: ကျွန်ုပ်သည် ၁၇ နှစ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ED ကိုထပ်မံမရနိုင်တော့သည့်အတွက်ရက်ပေါင်း ၉၀ အထိမှတ်တိုင်မရောက်မချင်း fapping၊ အနားသတ်ခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစိတ်ကူးကြည့်ခြင်းတို့ကိုရပ်တန့်လိုက်သည်။ အစဉ်အမြဲ porn ကို။
Succes နှင့်ကျရှုံးမှု - တစ်လကူညီနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြန်လာပြီး ED ပြန်လာတယ်။ ဒါပေမယ့်မဆိုးပါဘူး။
ကျွန်တော်အသက် ၁၇ နှစ်ပါ။ ငါငယ်ရွယ်စဉ်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးဘယ်တော့မှမထွက်ခဲ့ဘူး။ ချက်ချင်းပဲကျွန်တော်နှင့်အမီလိုက်သည် ငါမိန်းကလေးတကယ်ဘယ်တော့မှမရသူတစ် ဦး ရှက်ကလေးဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်သူငယ်ချင်းများကဲ့သို့ဖြစ်လို။ ငယ်ရွယ်သည့်အရွယ်တွင်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံလိုသည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်မဒီမိန်းကလေးနဲ့ ၂ နှစ်ကြာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတစ်နှစ်ခွဲကြာပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်မတို့လိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ငါပြောခဲ့သလိုပဲငါဟာငယ်ရွယ်တဲ့အရွယ်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့အတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်၊ သူမသည်ငါ့ကိုအရင်က blowjob နှင့် handjob ပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှစ်ကြိမ်စလုံးကြောင့်လွယ်လွယ်ကူကူပင်ရနိုင်သည်။ ငါတို့ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံဖို့သွားသောအခါ, ဘာမျှမ။ ငါအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်၊ ငါနင်းနေတဲ့အချိန်မှာငါဟာဒေါသထွက်နေတယ်၊ ငါစောစောစီးစီးလုပ်ခဲ့လို့မဟုတ်ဘဲကွန်ဒုံးကိုထည့်ပြီး ၀ င်ရန်ကြိုးစားသောအခါချက်ချင်းလဲကျသွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါတို့ထင်တာကငါဟာတုန်လှုပ်ချောက်ချားနေရုံသက်သက်ပဲလို့ထင်ပေမယ့်အဲဒါထက်မကတော့ဘူး။
သူမငါ့ကိုစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ဖြစ်သောကြောင့်ငါ၏ ED ၏အမှန်တရားကိုကျွန်ုပ်တစ်ခါမျှမပြောခဲ့ပါ။ ဒါနဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ ငါလုပ်ခဲ့တယ် ငါ fapping မရှိဘဲတစ်လသွား၏။ ငါမတိုင်မီချက်ချင်းမစားဘူး၊ ကျန်းမာတဲ့အစားအစာကိုစားပြီလို့သူမကပြောတယ်၊
ငါ fap အချိန်ကိုသင့်လျော်သောအချိန်ပမာဏပေးချင်သောကြောင့်, ငါမဆိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများလုပ်ဖို့သူမကိုတစ်လစောင့်ဆိုင်းစေခဲ့သည်။ ငါ့ခန္ဓာကိုယ်ကကျန်းမာနေလို့မဟုတ်ဘူးလို့ငါဆက်ပြောခဲ့တယ် အမှန်အတိုင်းပြောရရင်သူမထင်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလနောက်ပိုင်းမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကင်းမဲ့ခြင်းနဲ့လုံးဝကင်းလွတ်ခွင့်ရခဲ့ကြတာပါ။ ငါကစာသားဤအချက်မှာငါ့ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ကတည်းကငါအချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့နည်းနည်းအကြာတွင်ပြန်ပြန်သွား။ ကြောင့်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအရမ်းကောင်းတယ် ငါသူမ၏နှစ်ကြိမ်ငါ့ရှေ့မှာပြီးအောင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ မကြာခဏလိင်ဆက်ဆံဖို့အခွင့်အရေးမရဘူး။ သို့သော်တစ်နေ့တွင်ကွန်ဒုံးသည်ပျက်သွားပုံနှင့်သူမသုက်ပိုးအချို့ရရှိသည်ကိုစိုးရိမ်ခဲ့သည်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်တော့ငါအဲဒါကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးကွန်ဒုံးဟာဘယ်တော့မှပြိုကွဲတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့သူမသေချာအောင်မနက်တိုင်းဆေးသောက်လိုက်တယ်။ ဒီစိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့အချိန်မှာငါ fapped လုပ်ခဲ့တယ်။ ငါ့ကိုညစ်ပတ်စေတဲ့အပတ်က3ကြိမ်လိုပဲ။ ဒါအမှားပဲ။ ငါအကြောင်းကို2ပတ်ကြာပြန်သည်။
စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေပြီးတဲ့အခါမှာ၊ ငါတို့ဟာနောက်တစ်ခါလိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ED ၏အချိန်သည်နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လှည့်ပတ်သော်လည်း ပို၍ သေးငယ်သောပုံစံဖြစ်သည်။ ငါထိုးဖောက်မှု၏အခိုက်သည်အထိငါအနည်းငယ်ပျော့ပြောင်းမယ်လို့ငါစူပါခက်ပါလိမ့်မယ်။ ငါကွန်ဒုံးကိုလှိမ့်ဖို့အချိန်ယူတဲ့အခါအများအားဖြင့်ပျော့ပြောင်းသွားတယ်။ ငါပျော့ပျောင်းမသွားမီကဝင်နိုင်လျှင်ငါခက်ခဲနေဖို့လိမ့်မယ်။ သို့သော်ဤပြanotherနာသည်အခြားပြwithoutနာမရှိဘဲမသွားခဲ့ပါ။ အဖြစ်မကြာမီငါဝင်ရလိမ့်မယ်သကဲ့သို့ငါလာလိမ့်မယ်။ ပထမပြofနာတွေကတော်တော်လေးဆိုးဝါးလာပြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကိုထိမိလိုက်တာနဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ပျက်စေတယ်။
ကျနော်တို့စိတ်ပျက်မိကြောင်းငြီးငွေ့သွားပြီးနောက်တစ်လ၊ နှစ်လလောက်ပြန်လမ်းလျှောက်ပြီးပြန်ကျန်းမာလာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အခုငါမကြာသေးမီက fapped ပါတယ်။ ငါတကယ်အခုအချိန်မှာချင်ပေမယ့်ငါမရွေးချယ်။ ငါဒီ subreddit ကိုမြင်လျှင်ငါ့အဘို့မဖြစ်လျှင်ယနေ့ညပါတယ်လိမ့်မယ်။ ဒီပုံပြင်တွေကိုဖတ်တဲ့အခါငါဝမ်းသာလိုက်တာ။ ငါယခု nofap Streak အပေါ်ယခုပြီးနောက်ဖြစ်၏။2ရက်နှင့်ရေတွက်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤအရာကိုဖတ်လျှင်ဤအချိန်ကိုဖတ်ရန်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၄၀ ကျော်နေပြီဖြစ်သော်လည်း ၂၅ နှစ်တာကာလအတွင်း၎င်းတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ တစ်ခါတစ်ရံအခြားသူများထက် ပို၍ ဆိုးရွားသော်လည်း၊ ၎င်းသည်အမြဲတမ်းစိတ်ဖိစီးမှုသက်သာစေရန်ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သည် (ယခုလွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်နှင့် ၁၅ နှစ်ကထက်ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်အာရုံကြောဆိုင်ရာစွမ်းအင်များစွာရှိသည်) ။ အဆိုးဆုံးကတော့ငါကြည့်ရှုခြင်းဟာတစ်ပတ်ကို ၁၀ ကြိမ်ကနေ ၁၅ ကြိမ်ဖြစ်လေ့ရှိပြီးတစ်ပတ်တာကာလအများစုမှာ porn ကြည့်ရှုခြင်း (များသောအားဖြင့် PMO) ပါ။ ငါဖြုန်းတီးနေတာသေချာပါတယ် တစ်ပတ်ကို 12-15 နာရီတချို့ရက်သတ္တပတ်ငါလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ် (အထူးသဖြင့်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်) တွင်အများကြီးအလယ်အလတ်ငါမူကား, ငါ (ပြီးခဲ့သည့်အင်္ဂါနေ့ကိုရပ်တန့်ခြင်းမပြုမီ) နွေရာသီကျော်တစ်ပတ်လျှင် 3-5 နာရီအထိဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒါကြောင့်ဒီစာရိုက်တာနဲ့တစ်ပတ်လုံးနီးနေပြီ၊ ငါအပြည့်အဝသွားနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်2သိပ်ပြဿနာမရှိဘဲရက်သတ္တပတ်။ ဒါပေမယ့်3သို့မဟုတ်4ရက်သတ္တပတ်သွား၏အတွေးနီးပါးမဖြစ်နိုင်ပုံရသည်ဖြစ်သောခက်ခဲပုံရသည်, 12 ရက်သတ္တပတ်တစ်ဦးတည်းနှင့်ကြာကြာကြကုန်အံ့။ ငါဆိုလိုတာက, ဖြစ်နိုင်စရာ ငါလုပ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါနှစ်တွေတစ်လျှောက်မှာအကြိမ်တစ်ဆယ်ကျော်မတိုင်ခင်ကတည်းကနုတ်ထွက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတော့ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာမလုပ်ခဲ့ဖူးဘူး။
တစ်လအတွင်းမှာအပြုသဘောဆောင်တဲ့ရလဒ်တချို့မတွေ့ရဘူးလို့ခံစားမိပြီး“ အဲဒါကိုငရဲ” လို့ပြောပြီးအရှုံးပေးလိုက်ရလိမ့်မယ်။ ရက်ပေါင်း ၃၀၊ ၄၀ အကြာတွင်လုံးဝတိုးတက်မှုမရှိဟုမြင်ရခြင်း (အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ဤနေရာနှင့်အခြားနေရာများတွင်နေရာအနှံ့အပြားတွင်စာဖတ်နေလျှင်၎င်းသည်တကယ့်ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုဖြစ်သည် - ဆိုလိုသည်မှာလုံးလုံးအားနည်းခြင်း) - \_ t ထို့နောက်ရှိရာ heck အတွက်ငါလှုံ့ဆျောမှုသွားစောင့်ရှောက်ရန်ရှာရမလဲ ??
(ဟုတ်တယ်၊ ငါ ED မကောင်းဘူး၊ PMO (သို့) အနည်းဆုံး MO လိုမျိုးတခြားနည်းလမ်းတွေကိုမသုံးနိုင်ဘူး) ဒါ့အပြင်လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ နှစ်ခန့်ကငါ testosterone ဟော်မုန်းနိမ့်ရောဂါခံစားခဲ့ရတယ်။ တစ်လတည်းအကြိမ်ကြိမ်) သို့သော်ကျွန်ုပ်အတွက်လုံးဝဘာမျှမလုပ်ခဲ့ပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၌ Low-T (ဆရာဝန်၏ရုံးခန်းနှင့်အရာအားလုံး၌စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း) ရရှိခဲ့ကြောင်းကိုမည်သို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ နေ့စဉ် testosterone ဂျယ်လ်အစားထိုး (အန်ဒရိုဂျယ်) ကိုစတင်သုံးစွဲခဲ့သည်။ အဲဒါကနည်းနည်းလေးကူညီပေးတယ်၊ ဒါပေမယ့် Viagra ကကျွန်တော့်အရူး PMO အလေ့အထရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့ဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူး။ တဝက် လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်အတွင်းကကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကားချပ်သည် soft-core အပျော်တမ်းပစ္စည်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အများအားဖြင့်အပျော်တမ်းဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပို၍ စွဲလမ်းစေသောအမာခံပစ္စည်းများနှင့်စွဲလမ်းခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားခဲ့သည်၊ ငါအောင်မြင်မှုအချို့နဲ့ထင်တယ်။ )
TL; DR: ငါနောက်ထပ်တစ်ပတ်ပြည့်နိုင်တယ်လို့ထင်တယ် (ဒါကြောင့်ငါနှစ်ပတ်အပြည့်ရနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်) - ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီနောက်အပတ်တိုင်းမှာလောင်းကြေးအားလုံးပျက်သွားပြီလို့ငါခံစားရတယ်။ မဆိုအကွံဉာဏျ ???
ကျွန်ုပ်၏သုံးစွဲသူအမည်မှာ“ want_to_fap_LESS” ဖြစ်သည်ကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ဒါကငါတကယ်လိုချင်တာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ push ကတွန်းလာတာရပ်တန့်တာပါပဲ လုံးဝ(အချို့သော 'reboot' တစ်ခုခုအတွက် ၃ လမှ ၄ လနေလျှင်ပင်) အလွန်ခက်ခဲသောငရဲတစ်ခုလုံးပုံရသည်ယုတ္တိနည်းဒီဟာကအရက်အလွန်အကျွံနဲ့တူတယ်ဆိုတာငါသိတယ် (မင်းအမြဲတမ်းပြန်လည်ကောင်းမွန်လာတယ်), ဒါပေမယ့်ဒါကယုတ္တိဗေဒနဲ့ပါမတူဘူး၊ အလိုရှိ ကျွန်ုပ်ရွေးချယ်သောမူးယစ်ဆေးဝါး (porn) ကိုစွန့်လွှတ်ရန် - BTW သည်ကျွန်ုပ်ကြိုးစားဖူးသမျှတစ်ခုတည်းသောဆေးဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဟုတ်တယ်၊ ငါ ၀ န်ခံတာကမူးယစ်ဆေးဝါးလိုမျိုးပဲ။
ဒီတော့ကျွန်မအသက် ၂၉ နှစ်ရှိပြီ။ အသက် ၂၀ ကျော်ကတည်းက ED ဘွဲ့အတွက်အခက်အခဲရှိခဲ့တယ်။
တစ်နှစ်ကျော်သွားပြီဤသည်မြေတပြင်လုံး, ငါသည် Viagra ကို ယူ. မိန်းကလေးများအဘယ်သူအားမျှသိသည်။
ကိုယ့်ငါအသစ်တခုစတင်, မပိုတဲ့ Viagra လိုအသစ်တစ်ခုကိုမြို့သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
ငါဒီမိန်းကလေးနဲ့စတင်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်၊ သူမအရမ်းကောင်းတယ်၊ မယုံနိုင်လောက်အောင်ပူပြင်းတယ်၊ လိင်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ပုံစံနဲ့အရမ်းစိတ်မသက်မသာဖြစ်ရတယ်။ ကျနော်တို့စုံတွဲတစ်တွဲကြိမ်လှည့်စား, ပထမ ဦး ဆုံးငါကတကယ်တက်မရနိုင်ခြင်း, ဒုတိယအကြိမ်ငါ 3/4 စိုက်ထူရတယ်နှင့်ပါးစပ်စဉ်အတွင်းအပြီးသတ်နိုင်ခဲ့သည်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရမ်းစိတ်ပျက်မိတယ်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ ED အရာအားလုံးကိုတွက်ထုတ်နိုင်ပြီလို့ခံစားရတယ်။ ငါဝန်ခံရမည်ဟုဝန်ခံရမည်မဟုတ်သော်လည်းငါ့ဒေသ၌လိင်ကုထုံးရှာသည် ထိုအခါငါအဖြစ်အများအပြား fapping နှင့်လုံးဝရုပ်ပုံဖြတ်ဖို့ကြိုးစားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီ။
မနေ့ညကငါအိပ်ပျော်တော့မယ်၊ လိင်အကြောင်းတကယ်တော့မစဉ်းစားတော့ဘူး၊ ငါသက်သာရာရချင်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ (တကယ့်အဖြစ်အပျက်မဖြစ်ခဲ့ဘူး) ကျွန်ုပ်ပြissueနာသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်မတူပါ။ အနည်းငယ်စိတ်ဓာတ်ကျနေပြီး၊ ကျွန်ုပ်နေချင်နေသည့်လှပသောမိန်းကလေးထံမှကမ်းလှမ်းမှုများစွာကိုငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ အနည်းငယ် '' အနိုင်ရ။ '' သုံးပါ
ဒါနဲ့ porn ကြည့်ဘဲ, FAP, ထိုသို့သွားကြဖို့ဆုံးဖြတ်။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်အတူ Ed ဖူးနဲ့တူထိုသို့ပဲ! ဒီအဖြစ်ပျက်ကိုဘယ်တော့မှသိရသည်။ ငါသမျှသောဤစိတ်ကျရောဂါအတွေးများကိုစဉ်းစားငါ့ဦးခေါင်းအတွင်းအလွန်အကျွံဖြစ်ခဲ့သည်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လည်းငါသည်ကြိုးစားနေစောင့်ရှောက်လျှင်, အခြေအနေကပိုမိုငါကအလုပ်လုပ်ခဲ့နည်းကြိုးစားခဲ့နှင့်ပိုမိုစိတ်ကြင်နာတတ်သော။
နောက်ဆုံးတော့ငါအရှုံးပေးလိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်နောက်တစ်ခါကြိုးစားကြည့်မယ်၊ porn အကြောင်းမစဉ်းစားတော့ဘဲကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စ၊ အတိတ်အတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်ပြောပြရုံပဲ။ သို့သော်ထို့နောက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအရာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်၏ ဦး ခေါင်းထဲသို့စတင်ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေ့လျော့ခဲ့သောဤအတွေ့အကြုံအားလုံးရုတ်တရက်ကျွန်ုပ်၏လိင်ဆိုင်ရာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးစိတ်ထဲပေါ်လာပြီးကျွန်ုပ်၏ ED တိုးတက်နေမှုကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤကဲ့သို့သောအမြဲတမ်းမဟုတ်ခဲ့ပါ၊ ငါစတင်ပေါ်ပေါက်လာတာကိုစတင်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေထဲကို ၀ င်လာတဲ့အချိန်မှာဒါကိုသတိမပြုမိခဲ့ဘူး။
ဒါကြောင့်ကျွန်မရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝကိုကြည့်နေတယ်၊ ​​မျက်လုံးရှေ့မှာမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်နဲ့ကြည့်ရတာအရမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပေမဲ့အထူးသဖြင့်လှုံ့ဆော်မှုမဟုတ်ဘူး၊ ငါ fap လုပ်နေတုန်းပဲ။ ဒါနဲ့ငါ့လက်တော့ပ်ထုတ်လိုက်တယ် ငါနဲ့အတူရှိနေတဲ့မိန်းကလေးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး၊ စူပါ kink၊ ပူပြင်းတဲ့စုံတွဲ - porn (ဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူး) ကိုမကြည့်မိဖို့နုတ်ထွက်လိုက်တယ်။ ထိုအခါငါတကယ်ပူ, ရငျးနှီးသောလိင်ဆက်ဆံနေတဲ့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ငယ်ရွယ်စုံတွဲမှဖွင့်လှစ်။ ပြီးတော့! ငါနောက်ထပ်ဗျာဒိတ်တော်ရှိသည်, ဤသည်မှာလုံးဝငါ့ကိုဖွင့်မပေးပါ! Hahaha, ငါသည်ကိုယ့်ကိုကိုယ် WTF မှထင်?! ဤသည်မှာကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံစဉ်ကျွန်ုပ်ဖြတ်သန်းသွားသောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်နည်းသည်။ ကျွန်ုပ် fap ၏ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုခုသည် နှစ်ပေါင်းနှင့်ငါမည်သို့အမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံသနည်း။ ကျွန်ုပ်၌ ED ပြissueနာရှိနေသည်ကိုကျွန်ုပ်မည်မျှအံ့အားသင့်မိပါသနည်း ?? !!
ဒီတော့ဒီမှာငါသည်ငါ့ဦးနှောက်ကိုပြန်လည်စတင်ရန်ကြိုးစားနေ, r / nofap ဖြစ်၏။
TL / DR: ကြိုးစားခဲ့ fapping, ငါသည်ယခုငါသည်ငါ့ဦးနှောက် rewire ဖို့လိုအပ်ပုံကိုနားလည်ပါသည်။
PMO သိသာထင်ရှားသောနည်းလမ်းများ၌ငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။ အခြားဘယ်သူ့ကိုမှဤနည်းခံစားရပါတယ်?
အကြှနျုပျကိုနောက်ခံ: 26 / မီတာခန့် 15 နှစ်ပေါင်းအခြေခံအားဖြင့်ညစဉ်ညတိုင်း Fapping ခဲ့တာ။ porn အသုံးပြုမှုကိုငါ့အလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး effecting, နောက်ဆုံး 3-4 နှစ်များတွင် (နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများသို့တိုးချဲ့) တိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။ ကောလိပ်၌ငါပထမဦးဆုံးအပင်လုံးဝပူမိတ်ဖက်ဆေးလိပ်နှင့်အတူအချို့သော ED ပြဿနာများကိုသတိပြုမိတော့တယ်။ ငါပြဿနာတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်သဘောပေါက်လာသောအခါရဲ့, ဒါပေမယ့်ငါ NoFap ရှာဖွေတွေ့ရှိနှင့်ငါ့စွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများနှင့်ငါ့ PMO စွဲအကြားအသင်းအဖွဲ့ကိုဖန်ဆင်းရှေ့မှာအခြားနှစ်အနည်းငယ်ပါလိမ့်မယ်။ ငါစုံတွဲတစ်တွဲနှစ်ပေါင်းအဘို့, ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အရှက်ရှိနေသော်လည်း Viagra အပေါ်မှီခိုကြပါပြီ, ဒါပေမယ့်တောင်မှကြောင်းအမြဲအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ ဒါနဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့မှကျူးလွန်တာပါ။ ငါစိန်ခေါ်မှုကိုချစ်နှင့်ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး, ငါသည်ရှင်းလင်းစွာအကွောငျးရငျးမြားစှာအဘို့ဤလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ငါ Post-90 ရက်ရှေ့ဆက်ကြည့်ရှုနှင့်ငါ၏ PMO အလေ့အထအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်သည့်အခါကဆိုပါတယ်ခံရကြောင်း, ငါဆိုသည်ကားရမယ် ... ။
ငါ Fapping ကိုချစ်, ငါအားလုံး (ဥပဒေရေးရာ) အမျိုးအစားများ porn ကိုချစ်။ အစဉ်မပြတ်ငါရှိသည်, အစဉ်မပြတ်ငါလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ကိုယ်ကသာကငါ့အဘို့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်နှင့်အတူလုံးဝရိုးသားဖြစ်ခြင်းပေါ့လျှင်, ငါဟုန်းဟုန်း FAP နှင့်ဟုန်းဟုန်းချစ်ခြင်းမေတ္တာစေနိုင်လိမ့်ချင်တယ်။ နှစ်ဦးစလုံးနှင့်မကြာခဏသူကပြောတယ်! ကြောင်းမှားဘာမှရှိပါသလား? အမျိုးသမီးများနေ့ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်အများဆုံးအံ့သြဖွယ်အမှုအရာများမှာ - ငါ, မေတ္တာကိုးကွယ်သူတို့အားအမျိုးအစားအားလုံးကိုလေးစားချင်, အစစ်အမှန်နှင့်စိတ်ကူးကး၌တည်၏။ အတိအကျဘုံမဟုတ် - - ထိုအခါငါသဘောကျတယ်အမြိုးသမီးမြား၏ကြင်နာကြမ်းတမ်းအတွက်စိန်ပွင့်နေကြသည်ဒါကြောင့်အဘယ်ကြောင့် PMO အတူကွာဟချက်အတွက်ဖြည့်စွက်သည်မဟုတ်လော
ငါသည်ငါ့ကြီးထွားစံချိန်စံညွှန်းလျှော့ချဖို့ချင်ကြပါဘူး။ ငါဒါကြောင့်ငါမဆိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတှေ့ဆုံကြီးအတွေ့ရသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံအကြားအိုဆုံးရှုံးခံရဖို့ချင်ကြပါဘူး။ ကျွန်မကိုလည်း kink ကိုချစ်, ငါ, ငါ့ P ကိုအမျိုးအစားများအတွက် irrefutable တင်းမာမှုရှိနေသော်လည်းဤအမျိုးအစားထဲကနေငါရရှိရန်အတွက် arousal အခြေခံတစ်ခုခု, မ desensitization ့ရလဒ်ကြောင်းခံစားရသည်။ ငါ့ကြယ်ထက်လျော့နည်းစိုက်ထူဘို့မဟုတ်ကြလျှင်အမှန်ဆိုသည်ကား, ငါသည်ယခုထိုအခွင့်ကိုလုပ်နေခြင်းကိုဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်။ ဒါကကျနော် NoFap လုပ်နေတာကနေတိုးတက်လာသောစိုက်ထူကျော်လွန်များပြားလှသောအကျိုးခံစားခွင့်ကိုမမွငျပါဘူးလို့ပြောသည်မဟုတ်။
အခြားမည်သူမဆိုအလားတူခံစားရ, ဒါမှမဟုတ်မည်သည့်အတှေးအရှိပါသလား ငါသည်အလွန်အချို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးတန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်။
ဒီဖိုရမ်ကနေပုန်းအောင်းနေခဲ့ရပြီးဒီနည်းလမ်းဟောင်းကိုပြန်သွားခဲ့တယ်။ ငါပျင်းရိခြင်းနှင့်လိင်စိတ်ပျက်ခြင်းနှင့်ထိုညဉ့်အပြည့်အဝ PMO လုပ်ခဲ့တယ်သည့်အခါပြီးခဲ့သည့်တနင်္လာနေ့သည်အထိ, PMO အခမဲ့ 28 ရက်ကြာသွားပြီ။ ငါအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမသွားပါ, ဒါပေမယ့်အခြေခံအားဖြင့်ငါအင်္ဂါနေ့, စနေနေ့နှင့်မနေ့ကညထပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ကောင်းမွန်စွာအိပ်စက်ခြင်းကိုရှုပ်ထွေးစေခဲ့ပြီးလေ့ကျင့်ခန်းကိုရပ်လိုက်သည်။ ကြောက်စရာမဟုတ်ဘူး။
ယနေ့နံနက်ကျွန်ုပ်လက်ပ်တော့ပ်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဖျက်သိမ်းရန်ရဲစွမ်းသတ္တိရှိခဲ့သည် (ဟုတ်ကဲ့၊ ယခုအပတ်က ၃၀gb porn အသစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရိတ်သိမ်းခဲ့တယ်)၊ bittorent ကိုဖျက်လိုက်သည်၊ ထိုဗီဒီယိုကုဒ်များနှင့်အိုင်ပက်အက်ပလီကေးရှင်းများအားကျွန်ုပ်အားကြည့်ရှုနိုင်ရန်ကူညီသည်၊ ဖျက်ပစ်ခဲ့သည်။ ငါ့အလိုရှိသမျှ bookmarks ။ ကျွန်ုပ်သည်ကိုင်တွယ်ရမည့်အရေးကြီးသည့်အရေးကြီးသောဒေတာများနှင့်ရောနှောထားသောညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသော hard-disk တစ်ခုရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ငါပြိုလဲသွားပြီ၊ အခု ၁ ရက်ကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ထူထောင်ပြီးပြန်စမယ်။
ကျွန်တော့် ED ကအရမ်းပြင်းထန်လွန်းလို့ဒီအကျင့်မပျက်ခင်ငါကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အခက်ခဲဆုံး porn ကကျွန်တော့်ကိုခိုင်မာတဲ့စိုက်ထူမှုမပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး (၄) ခုမှ (၃) ခုအတွင်းကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သောအရာမှာကျွန်ုပ်သည်ထိခြင်းနှင့်ကြည့်ခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်သည်နှင့်ချက်ချင်းကွယ်ပျောက်သွားသည့်စိတ်မငြိမ်မသက်ပေါက်ကွဲခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာသန္ဓေတည်ခြင်းအတွက်အမျိုးသမီးတွေနဲ့လိင်ဆက်ဆံတာကိုမပြောသင့်ဘူး။ ဦး နှောက်ထဲမှာရှိနေတာကိုငါသိတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စနေနေ့မှာပြန်ဖြစ်လာတဲ့အခါငါလက်ကိုသုံးနေတုန်းမှာပဲ porn နဲ့အလယ်အလတ်တန်းစားပေါက်ဖွားမှုကိုအောင်မြင်နိုင်ခဲ့တယ်။ အပြည့်အဝ3မိနစ်။ အမျိုးသမီးတစ် ဦး ယောနိကိုထိုးဖောက်ရန်အလယ်အလတ်စိုက်ထူခြင်းသည်လုံလောက်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်မြင်မိသောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အထုပ်သည်အဆင်ပြေမည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့သည်။ ငါပြောနေတာကစနေနေ့နဲ့မနေ့ကအကြား၊ ငါ့ ဦး နှောက်ဟာအသည်းအသန်ညစ်ညမ်းတဲ့အရာအားလုံးကိုထပ်ပြီးခံစားသိမြင်လာပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကို“ ငြီးငွေ့ဖွယ်” ခံစားမိနိုင်ပြီးစိုက်ထူမှုရဲ့အားအင်နဲ့ကြာရှည်မှုမှာကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ရှိတယ်လို့ထင်တယ်။ ။
တိုတောင်း၌ငါ့ဇာတ်လမ်းကို: 26 ပုံမှန်အခြေစိုက်စခန်းအပေါ် fapper, 1-2x ကအနည်းဆုံးနေ့ဖြစ်၏။ 17 (နောက်ကျောထိုဖြစ်ရပ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့မအောင်မြင် + အများကြီးစိတ်ကျရောဂါသောဆက်ဆံရေးကိုတောင်အဆုံး!) နှင့်အတူပထမဦးစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကို။ ပညာရေး၏ကြီးမားသောဝန်တီထွင်ခဲ့သည်သည်အထိ fems နှင့်အတူမအများကြီးအဆက်အသွယ်ဖြစ်လျှင်, fapping ဘေးအန္တရာယ်, စတင်ခဲ့သည်။
ကိုယ်နီးပါး 2yrs လွန်ခဲ့တဲ့ငါ၏အယခုဟောင်း gf အတူသွားသောအခါကိုယ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီများအတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ရှာဖွေနေကြပါတယ်။ အကြှနျုပျ၏ဆရာဝန်ငါ့ကိုမကူညီခဲ့ဘူး (သင်တန်း) အရာ Viagra, ညွှန်ကြားပေးနဲ့မကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ယင်းနောက်မင်းငါ့ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမယ့် pr0n နှင့်အတူပုံမှန် fapping ၏ကနဦးပြဿနာပျောက်ကွယ်သွားပါစေခဲ့ပါဘူးသော ED ၏အထူးပြုနဲ့စိတ်ပညာရှင်ထံသို့သွားလေ၏။
ရှည်လျားသောဇာတ်လမ်းတို - fapstronaut ဖြစ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏လိင်ဆက်ဆံမှုကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်စေမည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ ငါဒီမှာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံအစီရင်ခံစာတွေအများကြီးကိုဖတ်ဖူးတယ်၊ ဒါဆိုလုပ်ကြည့်ရအောင်! fap အခမဲ့နေ့3ရှိပြီးသား started
ဒီတော့ဘာကသင့်ကိုအစွန်းကိုတွန်းလှန်ပြီးမင်းကို“ နောက်တဖန်မပြော” စေတာလဲ။
ကိုယ့်နောက်ဆုံးတော့ကိုယ့်4နှစ်ပေါင်းလိုချင်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ပင်လိင်ရှိသည်ဖို့ခဲယဉ်းအလုံအလောက်ရရှိရန် couldnt သောမိန်းကလေး (မကြားဆက်ဆံရေးပေမယ့်အိပ်ရာမှာ) နဲ့ရတယ်အခါ။ တစ်နှစ်ခွဲ chub အပေါ်4နာရီလုပ်ရန်ကြိုးစားရုံတက်အပ်ပေးတော်မူ၏။
ဘဝရုံဝေး zinging စောင့်ရှောက်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဒီ site ကိုအများကြီးကြည့်စရာမလိုပါဘူးဒါပေမယ့်ငါကတော့ porn ပေါ်မှာမင်းရဲ့ ဦး နှောက်ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကြည့်ရှုနေခဲ့ပြီ။ ကျွန်ုပ်၏တိုးတက်မှုကိုပထမရက် ၁၀၀ အတွင်းမှတ်တမ်းတင်ရန်စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်သော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်မသေချာပါ။ သို့သော်ပထမ ဦး ဆုံးနိဒါန်း။
ကျွန်ုပ်သည်အပျိုစင် ၂၂ နှစ်ဖြစ်ပါ၏။ ကျွန်ုပ်၌ porn သွေးဆောင်သော ED ရှိနေပါသည်။ တစ်နေ့ငါ့ရည်မှန်းချက်ကနောက်ဆုံးမှာတော့အဲဒါကိုဆုံးရှုံးဖို့ဖြစ်တယ်။ ဆွေမျိုးသင်္ဘောတစ်စီးအတွက်နှစ်တွေကြာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါငယ်ရွယ်ပြီးကျောင်းတက်နေတယ်၊ ​​ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကောင်းလာရင်၊ ငါနင့်ရဲ့အစောပိုင်းနှစ်တွေကိုငါပျောက်ဆုံးနေတဲ့အရာအားလုံးကိုအမီလိုက်ချင်တယ်။ အခုတော့မေးခွန်းမေးခွန်းရှိနေဆဲ, ဒီရှာဖွေတွေ့ရှိမှုစတင်ခဲ့တာလဲ
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်တော်မသေချာပေမဲ့ငါတတ်နိုင်သမျှပြန်ပေးမည်။ ငါလက်သီးစဖွင့်တုန်းကအသက် ၁၅ နှစ်အရွယ်မှာသတိရမိတယ်။ တီဗွီကနေစပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာပေါ့။ ဤသည်ထူးဆန်းတာကရုပ်မြင်သံကြားမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့ဝတ်လစ်စလစ်မှုန်ဝါးနေသောမြင်ကွင်းများမှဖြစ်သည်။ ညဥ့်နက်သန်းခေါင်ယံတွင်မိန်းကလေးများရိုင်းသွားသောကြော်ငြာများကိုကြည့်ခြင်းမှ အဲဒီနောက်မှာတော့ပျော့ပျောင်းတဲ့အမာခံကနေပြင်းထန်သောလိင်အကြမ်းဖက်မှုလိင်သို့ကူးပြောင်းသည့်အင်တာနက်သို့ရောက်ခဲ့သည်။
အခုတော့ငါကသူတို့ကိုအများကြီးစဉ်းစားခဲ့ကြပေမယ့်အများကြီးနဲ့ porn အလွန်အစွန်းရောက်မရခဲ့ပါဘူး။ အသက် ၂၁ နှစ်မှာဒီချစ်စရာဆံပင်ရွှေရောင်မိန်းကလေးတင်ဖို့ကြိုးစားနေစဉ်မှာဒီပြproblemနာကိုကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ ငါမိန်းကလေးတစ် ဦး ဆောင်ခဲ့နိုင်အသံအရှိဆုံးဖိနှိပ်ရာအရပ်ဖြစ်ကတည်းကဒါဟာငါ့အမြေအောက်ခန်းထဲမှာစတင်မှတ်မိသေးတယ်။ ငါထွက်အောင်စတင်နည်းနည်းစိတ်လှုပ်ရှားရလိမ့်မယ်။ အ ၀ တ်အထည်တွေပြတ်သွားပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထိန်းနိုင်ဘဲစိုက်ထူမရနိုင်ဘူး။ နားလည်ရလောက်အောင်ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်လှုပ်ရှားနေပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ပျှမ်းမျှအရွယ်အစားနှင့်ကျွန်ုပ်အတွက်ဖန်တီးခဲ့သောကျွန်ုပ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိနှိပ်မှုများကြောင့်စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ငါကအဖြစ်ကချွတ်လွန်။ ငါသူမကိုသူမလူယောက်ျားထံမှရရှိခဲ့သမျှကိုအကောင်းဆုံးအော်ဂဇင်အဖြစ်သူမပြောဆိုထားသည်သောအရာကိုပေးစားထွက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ သူမသည်သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်ဖြတ်သန်းသွားသည်ကိုလှုပ်ခါဘို့မဟုတ်ခဲ့လျှင်သူမမုသာစကားကိုစဉ်းစားလိမ့်မယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်နှင့်အပေါ်ချိန်းတွေ့။ ငါဒီအချိန်စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုငါ့ကိုထိမသွားနိုင်အောင်ငါ porn ကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်သတိရပါ။ ငါသူမကိုငါ့အိပ်ခန်းထဲကိုခေါ်သွားပြီးသူ့ကိုသံကြိုးတစ်ချောင်းထဲမှာတွေ့လိုက်ရုံနဲ့ငါ့ကိုအရမ်းတုန်လှုပ်သွားစေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်သူမလိင်ဆက်ဆံမှာမဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့လှည့်ဖြားခြင်းနှင့်သူမသူမ၏အပေါ် cum ဖို့ကျွန်မကိုမေးတယ်။ ငါမတတ်နိုင်တော့ဘူးငါ့စိုက်ထူမှုအားနည်းလာပြီးအားနည်းလာတယ်။ ငါသူမကိုရူးသွပ်ခဲ့သောကြောင့်ငါနောက်ဆုံးတော့သူနှင့်အတူဖြတ်လေ၏။ ငါဒီပြproblemနာကိုစတင်စတင်ခဲ့ကြောင်းအရိပ်အမြွက်စတင်ခဲ့သည်။
ငါစင်းကလပ်သို့သွားသောအခါ, ငါတကယ် freaked ။ ငါပြaနာတစ်ခုသတိထားမိလာတယ်။ ငါသည်ငါ့ပထမ ဦး ဆုံးအားလုံးဝတ်လစ်စလစ်ချွတ်ကလပ် (ဒုတိယအကြိမ်တစ်စင်းကလပ်သွား) သို့သွား၏။ ငါအပြည့်အဝဝတ်လစ်စလစ်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့မိန်းကလေးများရှိခဲ့ကြသကဲ့သို့ငါခက်ခဲမရနိုင်တော့ငါ့ဒစ်ပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ tits, မြည်းနှင့် pussy ပွတ်, သူတို့ကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်, သတိပြုမိသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သူတို့ကဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့ငါကလိင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာမဟုတ်ဘူး။ ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ကလပ်အသင်းကိုသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟာအရမ်းကိုချိုလွန်းတဲ့အတွက်ဘောင်းဘီမှာပေါက်ကွဲနိူင်တဲ့အတွက်ကခုန်ရခြင်းကိုမကြောက်ခဲ့ပါ။ ငါအကြိမ်ကြိမ်သွားသကဲ့သို့ငါဒီပို။ ပို။ သတိပြုမိသည်။ ထိုအခါငါကခုန်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာမိန်းကလေးများနှင့်အတူစမ်းသပ်ပြီးနှင့်နေဆဲတော့ဘူးစိတ်လှုပ်ရှားမရနိုင်ပါ။ ငါတစ်ခုခုလုပ်ရမယ်နေသေးတယ်။ ငါညစ်ညမ်းသောအစားအစာကိုတစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကြာအောင်ကျွန်တော်တစ်လသို့မဟုတ် ၂ အထိညစ်ညမ်းသောအရက်ကိုမသောက်မှီတိုင်အောင်သွားခဲ့သည်။ သူကကျောင်းနားချိန်တွင်သူမနေထိုင်စဉ်ကကျွန်ုပ်နှင့်ချိန်းတွေ့ခဲ့သည့်မိန်းကလေးတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူမကျွန်တော့်ငပဲကိုကိုင်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော့်ရဲ့စိုက်ထူမှုဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူမနဲ့နောက်ထပ်ရုန်းကန်ခဲ့တာမျိုးတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။
အဲဒီနောက်ငါဟာတကယ်ကိုလိုချင်တာလို့ဒီအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့မိန်းကလေးနဲ့အိပ်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ၄ ရက်ခန့်အကြာအထိနည်းနည်းကြာကြာဆက်သွားခဲ့တယ်။ ငါသူမရဲ့သူငယ်ချင်းတွေနေရာမှာငါနဲ့အတူရှိနေခဲ့ပြီးငါမခံစားမိလို့သတိပြုမိလိုက်တယ်။ ငါကခါးသီးတယ်၊ မိန်းမတွေနဲ့တော့မခံစားမိလို့နေမကောင်းဖြစ်နေတယ်။ ထို နေ့မှစ၍ ကျွန်ုပ်သည်ယခု ၁၀၀ ရက်စိန်ခေါ်မှုကိုစတင်နေပြီဖြစ်သည်။ အခုတော့ငါဟာအစွန်းရောက်ကိစ္စတစ်ခုလို့မထင်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါ porn ကငါ့ဘဝကိုအကျိုးသက်ရောက်တယ်ဆိုတာငါယုံကြည်တယ်၊ ငါအဆုံးသတ်ချင်တယ်၊ အဲဒါကငါ့ကိုဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်တယ်ဆိုတာကိုငါမြင်တယ်။
ဒီတော့ဒီမှာငါ 12 ၏အဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုငါသမ္မာသတိရှိကြလော့5ရက်ပေါင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်၏။ ငါကြိုးစားအပ်ဒိတ်လုပ်ဒီနေ့စဉ်ပေမယ့်ကျောင်းကကပတ်ပတ်လည်လာအဖြစ်ထွက်ရှိမှသာနည်းနည်းဖြစ်ရလိမ့်မည်ပါလိမ့်မယ်။ ငါသည်လည်းသူတို့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဖြစ်ကြသည်ဟုဆိုသိသာသည့်တိုးတက်မှုကိုခြေရာခံနိုင်ရန်အတွက်ကလပ်အသင်းမှာမိန်းကလေးများနှင့်အတူကခုန်တစ်နေ့တာအတွင်းအမျိုးသမီးတွေချဉ်းကပ်စတင်ခဲ့ပါပြီ။
ဒါ့အပြင်ငါမှာအားလုံးပြောင်းလဲသွားတယ်လျှင်ကြည့်ဖို့ငါ့အ 21st နေ့၌ချွတ်ကလပ်သွားဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။
ထာဝရဘုရားကို oh ငါသည်ဤထဲကလိုချင်တာတွေအဘို့အကြှနျုပျ၏ရည်မှန်းချက်များ။
ငါလွယ်လွယ်ကူကူ horny နှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ချင်တယ်။
သူတို့ကိုငါနှင့်အတူ horny ခုန်ဖြစ်ချင်တယ်။
ငါ Stripper တစ်ဦးထံမှစိုက်ထူရချင်တယ်။
ငါ (ကျနော်ပြီးသားတော်တော်လေးဖြစ်ကြောင်းကိုသော်လည်း) ကိုပိုမိုလူမှုရေးဖြစ်ရှိချင်တယ်။
ငါသည်ငါ့ willpower တိုးတက်လာဖို့ချင်တယ်။
နှင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့ ... ငါပျော်ရွှင်ချင်တယ်!
ဒီဖိုရမ်ကနေပုန်းအောင်းနေတဲ့နည်းလမ်းဟောင်းတွေကိုကျွန်တော်ဒီအပတ်ထဲမှာတစ်ယောက်တည်းနေခဲ့ဖူးတယ်။ ငါပျင်းရိခြင်းနှင့်လိင်စိတ်ပျက်ခံစားခဲ့ရခြင်းနှင့်ထိုညဉ့်အပြည့်အဝ PMO လုပ်ခဲ့တယ်သည့်အခါနောက်ဆုံးတနင်္လာနေ့သည်အထိ, PMO အခမဲ့ 28 ရက်ကြာသွားပြီ။ ငါအသေးစိတ်သို့မသွားပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်အခြေခံအားဖြင့်ငါတနင်္ဂနွေ, စနေနေ့နှင့်မနေ့ကညထပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ကောင်းမွန်စွာအိပ်စက်ခြင်းကိုရှုပ်ထွေးစေခဲ့ပြီးလေ့ကျင့်ခန်းကိုရပ်လိုက်သည်။ ကြောက်စရာမဟုတ်ဘူး။
ယနေ့နံနက်ကျွန်ုပ်လက်ပ်တော့ပ်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဖျက်သိမ်းရန်ရဲစွမ်းသတ္တိရှိခဲ့သည် (ဟုတ်ကဲ့၊ ယခုအပတ်က ၃၀gb porn အသစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရိတ်သိမ်းခဲ့တယ်)၊ bittorent ကိုဖျက်လိုက်သည်၊ ထိုဗီဒီယိုကုဒ်များနှင့်အိုင်ပက်အက်ပလီကေးရှင်းများအားကျွန်ုပ်အားကြည့်ရှုနိုင်ရန်ကူညီသည်၊ ဖျက်ပစ်ခဲ့သည်။ ငါ့အလိုရှိသမျှ bookmarks ။ ကျွန်ုပ်သည်ကိုင်တွယ်ရမည့်အရေးကြီးသည့်အရေးကြီးသောဒေတာများနှင့်ရောနှောနေသည့်ပြင်ပ harddisk တစ်ခုနှင့်ပြည့်နေဆဲဖြစ်သည်။ ငါပြိုလဲသွားပြီ၊ အခု ၁ ရက်ကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ထူထောင်ပြီးပြန်စမယ်။
ကျွန်တော့် ED ကအရမ်းပြင်းထန်လွန်းလို့ဒီအကျင့်မပျက်ခင်ငါကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အခက်ခဲဆုံး porn ကကျွန်တော့်ကိုခိုင်မာတဲ့စိုက်ထူမှုမပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး (၄) ခုမှ (၃) ခုအတွင်းကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သောအရာမှာကျွန်ုပ်သည်ထိခြင်းနှင့်ကြည့်ခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်သည်နှင့်ချက်ချင်းကွယ်ပျောက်သွားသည့်စိတ်မငြိမ်မသက်ပေါက်ကွဲခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာသန္ဓေတည်ခြင်းအတွက်မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံတာကိုမပြောသင့်ဘူး။ ဦး နှောက်ထဲမှာရှိနေတာကိုငါသိတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စနေနေ့ပြန်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာငါ့လက်ကိုသုံးနေတုန်းမှာပဲ porn နဲ့အလယ်အလတ်တန်းစားပေါက်ဖွားမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ အပြည့်အဝ3မိနစ်။ အမျိုးသမီးတစ် ဦး ယောနိကိုထိုးဖောက်ရန်အလယ်အလတ်စိုက်ထူခြင်းသည်လုံလောက်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်မြင်မိသောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အထုပ်သည်အဆင်ပြေမည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့သည်။ ငါပြောနေတာကစနေနေ့နဲ့မနေ့ကငါ့ရဲ့ ဦး နှောက်ဟာညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေအားလုံးကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးအဲဒါကိုငါ“ ငြီးငွေ့စရာ” လို့ခံစားရပြီးစိုက်ထုတ်မှုရဲ့ခွန်အားနဲ့ကြာရှည်မှုမှာကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ရှိတယ်လို့ထင်တယ်။ ။ LINK
ငါ့အိပ်မက်တွေရဲ့ကောင်မလေး၊ ငါတို့ဒီဟာကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတည်ဆောက်ခဲ့ကြပြီ။ နောက်ဆုံးတော့သူမရဲ့အိမ်ပြန်ပါ။ ငါထိုးဖောက်ဖို့အထိအထိအပြည့်အဝစိုက်ထူရှိသည်, ပြီးတော့သူကသွားတတ်၏။ ဒီဟာကိုဒီမှာပြီးယခုအဆုံးသတ်ရန်လိုသည် ငါလုံးဝအအေးကြက်ဆင်သွားကြဖို့ကြိုးစားနေ, ရက်အနည်းငယ်စုံတွဲပြန်ပြောပြဖို့ကြိုးစားနေရုန်းကန်နေခဲ့ရတယ်, ဒါပေမယ့်သူကအဆုံးသတ်ဘယ်မှာဒီနေရာမှာပါပဲ။ သူမသည်လုံးဝနားလည်သဘောပေါက်ပြီးအံ့သြဖွယ်ရာဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတွင်အရှက်ရခဲ့ရသည်။ ငါကျိုးတဲ့လူတစ်ယောက်ခံစားရတယ် ငါဆရာ ၀ န်ကိုရောက်ဖူးတယ်၊ စစ်ဆေးမှုတွေပြီးပြီ။ ငါ့ရဲ့ ED ပြproblemsနာတွေကိုသူတို့ရှာနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိဘူး။
စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဒီ post အတွက်ပစ္စည်းအများကြီးမရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒါကိုထုတ်ဖို့လိုတယ်လို့ငါတကယ်ခံစားခဲ့ရတယ်။ ငါနောက်တဖန် porn ကိုကြည့်ဘယ်တော့မှ။
ဟေ့လူ၊ ငါအခုပြproblemနာရှိနေပြီ။ ကျွန်ုပ်၏ပုံပြင်အပြည့်အစုံဖတ်လိုပါကလွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကမှကျွန်ုပ်၏ post ကိုစစ်ဆေးပါ။ ဒါပေမယ့်အခြေခံအားဖြင့်တော့မင်းဟာငါနဲ့ထပ်တူထပ်မျှကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်၊ အဲဒါက "porn-induced ED" ပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်များနှင့်မိန်းကလေးများအားကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်တွင်လိင်မှုကိစ္စကိုလှုံ့ဆော်ရန်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်တကယ့်လက်တွေ့အခြေအနေတွင်ရှိနေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်မည်သို့တုံ့ပြန်ရမည်ကိုမသေချာပေ။ အနည်းဆုံးဒီငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မဟာ ၁၇-၁၈ နှစ်ကစပြီးအမာခံတွေအများကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့လို့ (အခုအသက် ၂၁ နှစ်ရှိပြီ) ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ လအထိမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတောင်မှမနမ်းခဲ့ဖူးလို့ပါ။ ထို့ကြောင့်လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကနောက်ဆုံးတွင်အပျိုစင်ဘဝပျောက်ဆုံးသွားသောအခါကျွန်ုပ်၏စိတ်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာသည်မည်သို့ခံစားရမည်ကိုမသိခဲ့ပါ။
သင်၏အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှုမှာအနိမ့်ဆုံးရက်ပေါင်း ၉၀ မသွားဘဲနှင့် porn, masturbating နှင့် orgasm (PMO) ကိုသွားရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏စိတ်ကိုလိင်အရာမှအနားယူပါ။ သင်၏ဘဝ၏အခြားရှုထောင့်အားလုံးကိုတိုးတက်အောင်ကြိုးစားပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ၊ ကျန်းမာစွာစားပါ၊ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြစ်စေပါ၊ ဝါသနာအသစ်တစ်ခုသင်ယူပါ။ အချိန်တန်လျှင်ပြန်လာပြီးသင်၏ ED ကွယ်ပျောက်သွားလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည် PMO နံပါတ် ၃၉ တွင်ရှိနေပြီးတိုးတက်မှုများကိုစတင်တွေ့မြင်နေရသည်။